စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၁ ) ( ရုရှ စကား – ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၁ ) ( ရုရှ စကား – ၂ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၁ ) ( ရုရှ စကား – ၂ )
Posted by Foreign Resident on Apr 18, 2013 in Think Different | 54 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၁ )
( ရုရှ စကား – ၂ )
အဘ ရဲ့ အခု Post ဟာ ၊
အဘ ရဲ့ အရင် Post ၊
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၀ )
( ရုရှ စကား ပြောသင့်တယ် ဆိုပဲ ) Post မှာ ၊
ဝင်ရောက် Comment ပေးသွားတာတွေကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းရင်း ၊
အဘ ရဲ့ Reply Comment ဟာ အရမ်း ရှည်သွားတဲ့ အတွက် ၊
Post အသစ်တင်လိုက်ရတာပါကွယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ မူရင်း Post စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၀ ) ( ရုရှ စကား ပြောသင့်တယ် ဆိုပဲ ) နှင့် ၊
တွဲဖတ်မှသာလျှင် ဇတ်ရည်လည်မယ့် သဘော ရှိပါမယ် ။
အဓိက ကတော့ ကို Guest နှင့် ကို ကပ္ပိယ မောင်ကြီး ရဲ့ Comment ကို အကြောင်းပြန်တာပါ ။
” မက္ကာမှာသွားပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်..
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဗလီတွေ မရေနိုင်အောင် ဆောက်ထားပြီးပါပြီ။
ဒါတောင် လူ့ အခွင့်အရေး သိပ် မထွန်းကားသေးလို့ ”
ဒီလို အယူအဆမျိုးကို ကျနော်လည်း ငယ်နုစဉ်တုန်းက ယူခဲ့ဘူးပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဆရာတို့ကို မေးချင်တာက ၊
ဆရာတို့ ကျနော်တို့ က ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝတဲ့ ၊
မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ချင်တာလား ။
ဒါမှမဟုတ် ၊ ဆော်ဒီ လိုမျိုး ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ၊
ဒီမို ကရေစီ မရှိတဲ့ ၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် နိုင်ငံ အဖြစ်ကို တည်ဆောက်ချင်တာလား ။
ကျနော့် ဦးတည်ချက် ကတော့ ရှင်းပါတယ် ။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝတဲ့ စံနစ် ကိုသာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက် ၊
ကျနော် ကိုးကားရင်တောင် ၊
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေ နှင့် ၊
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လျှော်ညီတဲ့ အပြု အမူ တွေကိုပဲ ၊
ကိုးကား ၊ နှိုင်းယှဉ် ၊ အထင်အမြင် ကြီး ၊ လိုက်နာမှာဖြစ်ပြီး ။
ဆော်ဒီ လိုမျိုး ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ၊
ဒီမို ကရေစီ မရှိတဲ့ ၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် Theist နိုင်ငံ တွေကို ၊
အရာသွင်း ၊ နှိုင်းယှဉ် ၊ တုပနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကို Guest နှင့် ကို ကပ္ပိယ မောင်ကြီး တို့လည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေ ။
ကိုယ် က ဘယ်ဖက်ကို သွားချင်နေတာလဲလို့ ။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဖက် လား ။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက် ဖက် လား ။
” ကိုယ့်အိမ်ကို လာတည်းတဲ့ သူဖုန်းစားဟာ..
အိမ်ရှင်ရဲ့ ကျွေးတာစား ၊ ပေးတာယူ ၊ ထားတဲ့ နေရာမှာနေ နေရမှာပဲ “
အမှန်တော့ ၊ ကျနော် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ၊
လူမျိုးရေး ( ဘင်္ဂါလီ ) ၊ ဘာသာရေး ( မွတ်ဆလင် ) ကိစ္စတွေမှာ ၊
ဝင် မပြောသလောက်ကို ရှောင်နေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ ။
အဓိက ကတော့ ၊
ကျနော်က လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ ကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်နေတော့ကာ ၊
ဝင်ပြောမယ် ဆိုရင် ဘာသာခြား ၊ လူမျိုးခြား ဖက်ကနေ ဝင်ပြောရမယ့် သဘော ဖြစ်နေလို့ပါ ။
ကိုယ် ကလည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်သူ ဖြစ်နေတော့လည်း ၊
ကိုယ့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘက်ကို ၊ နစ်နာစေမယ့် အပြုအမူ မလုပ်ချင်တာလဲ ပါသပေါ့လေ ။
ဒါပေမယ့် ၊ အခုတော့ ” သူဖုန်းစား ” တို့ ” အိမ်ရှင် ” တို့ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေက ၊
ရင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှုပ်ခါစေခဲ့လို့ ၊
ပါးပါးလေး တစ်ချက်လောက်တော့ ထောက်ပြချင်စိတ် ပေါက်လာပါတယ် ။
လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်မှာရော ၊
တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာပါ အဓိက ကျတဲ့ အချက် တစ်ချို့ ရှိပါတယ် ။
၁ ။ တကယ် အပြစ်ရှိတဲ့သူဟာ ၊ အပြစ်ကနေ လွတ်သွားတယ် ဆိုရင် ၊
ဒါဟာ တရားမျှတမှု မဏ္ဍိုင် ယိမ်းယိုင်တာပါ ။ ဒါဟာ တော်ပါသေးတယ် ။
၂ ။ အပြစ် မရှိတဲ့သူဟာ ၊ မှားယွင်းပြီး အပြစ်ဒါဏ် ပေးခံလိုက်ရတာပါ ။
ဒါကတော့ ၊ တော်တော် ဆိုးပါတယ် ။ တရားမျှတမှု မဏ္ဍိုင် လုံးဝ ပြိုလဲသွားတဲ့သဘောပါ ။
ဒီလို အဖြစ် အပျက်မျိုး ၊ မဖြစ်ရလေအောင် အစွမ်းကုန် တားဆီးရပါမယ် ။
O K ။
အခု ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စလေးကိုပဲ ကြည့်ရအောင်ပါ ။
၁ ။ ဘင်္ဂါလီ အဖေ နှင့် ဘင်္ဂါလီ အမေ ၊
သူတို့ဟာ နိုင်ငံခြားက ခိုးဝင်လာတာ ၊ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ် ၊ မဖြစ်ချင် မဖြစ်ဘူး ။
( ဘင်္ဂါလီတွေကတော့ ဟိုးရှေးကတည်းက နေလာတာလို့ ပြောနေပါတယ် ။
ထားပါ ၊ ဒါက ၊ သမိုင်း ပညာရှင်တွေ ငြင်းရမယ့် ကိစ္စ ၊ ကိုယ် သိပ်မသိဘူး )
အဲဒီ ၊ ဘင်္ဂါလီ အဖေ နှင့် ဘင်္ဂါလီ အမေ ဟာ အပြစ် ရှိတယ်ပဲ ထားပါတော့ ။
၂ ။ အဲဒီ ၊ ဘင်္ဂါလီ အဖေ နှင့် ဘင်္ဂါလီ အမေ ကနေ ၊
မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာပဲ မွေးလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ သား နှင့် ဘင်္ဂါလီ သမီး တွေ ။
လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ စံတွေ အရ ဆိုရင် ၊
အဲဒီ ၊ မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာပဲ မွေးလာတဲ့ ၊
ဘင်္ဂါလီ သား နှင့် ဘင်္ဂါလီ သမီး တွေမှာ ၊ ဘာ အပြစ်မှ မရှိပါဘူး ။
က ။ သူတို့ဟာ ဘယ် အဖေ ၊ အမေ ရဲ့ ဝမ်းတွင်းမှာ မွေးပါလို့ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိရှာပါဘူး ။
ခ ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူ အရ ဆိုရင် ၊
ကျနော်တို့ လဲ နောင် ဘဝ မှာ ဘင်္ဂါလီ သား သမီး တွေ ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ ။
ဂ ။ သူတို့မှာ ဘာ အပြစ်မှ မရှိရှာပါဘူး ။
ထားပါတော့ ၊ အဲဒီ အပြစ် မရှိရှာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ သား နှင့် သမီး Generation အထိ ၊
ကျနော်တို့ ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ကြမယ် ၊ လူ့အခွင့်အရေး မပေးပဲ ကန့်သတ်ထားကြမယ် ။
ဟုတ်ပါပြီ ၊ ဟုတ်ပါပြီ ၊ ကြားရတာ နဲနဲ နားခါးနေပေမယ့် ၊ ထားပါတော့လေ ။
၃ ။ လာပြီ ၊ အခုမှ တကယ် လာပြီ ။
အဲဒီ့ ၊ ဘင်္ဂါလီ သား နှင့် ဘင်္ဂါလီ သမီး တွေ ကနေ ၊
မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာပဲ ဆက်ပြီး ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ၊
ဘင်္ဂါလီ မြေး နှင့် ဘင်္ဂါလီ မြေးမ တွေ ။
အဲဒီ ၊ ဘင်္ဂါလီ မြေး နှင့် ဘင်္ဂါလီ မြေးမ တွေ Generation အထိပါ ၊
ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ကြမယ် ၊
လူ့အခွင့်အရေး မပေးပဲ ကန့်သတ်ထားကြမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
ဒါဟာ ၊ ကြီးကျယ်တဲ့ မ တရားမှု ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုကြီး ပါပဲ ။
အဲလို ဘင်္ဂါလီတွေ အပေါ် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှုတွေ မရှိဘူးလို့တော့ ၊ မပြောပါနှင့် ။
ကျနော် ကိုယ်တိုင် ရခိုင်ကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ ရောက်ဘူးပါတယ် ။
ကျနော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အမြင်ကို ပြောရရင် ၊
အဲဒီ ၊ ဘင်္ဂါလီ မြေး နှင့် ဘင်္ဂါလီ မြေးမ Generation ကို ၊
၁ ။ တိုင်းရင်းသား ပေးစရာ မလိုပါဘူး ။
၂ ။ နိုင်ငံသားတော့ မဖြစ်မနေ ပေးသင့်ပါတယ် ။
၃ ။ လက်ရှိ ရခိုင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အများစုကြီးဟာ ၊
ဘင်္ဂါလီ ၊ မြေး Generation ဆိုတာ မမေ့ပါနှင့် ။
၄ ။ အထူးသဖြင့် ၊ အခုမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ၊
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မရာမာကြီး လူမျိုးတွေကိုတော့ ၊ လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ကြိုဆိုပြီးတော့ ၊
အရင်ထဲက ရောက်နှင့် နေပြီးသား ဘင်္ဂါလီ တွေကိုကြတော့ တမျိုး ဆက်ဆံရင် ၊
ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာဆိုပြီး ဘယ်လို မျက်နှာပြကြမှာလဲ ။
၅ ။ နောက်ပြီးတော့ လက်ရှိ ရခိုင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာ ၊
ဘယ်တုန်းကမှ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
( ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ Constitution အရ ၊
၁၉၇၁ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာတဲ့ အချိန်မှာ ၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ နယ်နမိတ် ထဲမှာ ရှိနေသူကိုသာ ၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါတယ် )
၆ ။ နော်ဝေ နိုင်ငံဟာ သူ့နိုင်ငံထဲမှာ ၇ နှစ် နေပြီးရင် ၊
နိုင်ငံသား လျှောက်ခွင့် ပေးပါတယ် ။
ရ ။ ကိုယ့် သမိုင်းမှာ ၊ ကိုယ် လုပ်ခဲ့တာတွေကသာ တရားပါတယ်လို့ ၊
ကျားကျား မီးယပ် ထင်နေသူတွေကိုတော့ ၊ ကျနော် ပါးပါးလေးပဲ ဥပမာ ပေးပါ့မယ် ။
မန္တလေးက ၊ မဟာ မြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ကို ၊
မူရင်း ပိုင်ရှင် ၊ ရခိုင်တွေ လက်ထဲကို အရင် ပြန်ပို့လိုက်ပါဦး ။
အဲလို ပြန်ပို့ပြီးရင်တော့ ၊
မြန်မာတွေဟာ တော်တော် တရားမျှတတဲ့ လူမျိုးပါလို့ ၊
ကျနော် ထောက်ခံပေးပါ့မယ် ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အချင်းချင်း ၊ ပါးပါးလေး ပဲ ၊
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်ထောင်းမိတာ ဖြစ်လေတော့ ၊
သိပ်ပြင်းထန် / ကြမ်းတမ်း တဲ့ Comment တွေကိုတော့ ၊
မြင်လည်း မမြင်ချင် ၊ အကြောင်းလည်း ပြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
တစ်ဖက်မှာလည်း ၊ ဒီလို တွေးဆစရာ အချက်တွေ ရှိနေပါလားလို့ ၊
စာနာစိတ်လေး ဝင်မိရင် တော်ပါပြီ ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အချင်းချင်း ၊ ရန်လည်း မဖြစ်ချင်ပါဘူး ။
ဘါ့ဂျီး ပြောဒါဂဒေါ့ ဟုတ်တုတ်တုတ်ဘဲဗျ
တစ်ခုရှိတာက ဘါ့ဂျီး သာ ကလားနှစ်ရွာဂျား တဲထိုးပြီးနေရမယ်ဆိုရင်
” ဘါ့ဂျီး သာ ကလားနှစ်ရွာဂျား တဲထိုးပြီးနေရမယ်ဆိုရင်
ဘါ့ဂျီး ပတ်ပြေးမှာသေခြာဒယ် ”
အင်း ၊ ကို အောင်ပု ပြောတာလဲ မှန်ပါတယ် ။
အဘ လဲ သူတို့ကြားမှာ ရောက်နေရင် ၊ ထွက်ပြေးရမလား ထင်မိတယ် ။
ကိုယ်တွေကတော့ ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်လေတော့ ၊
ကိုယ့် အလှည့်မှာတော့ ၊ စာနာ နားလည် ပေးပြီး ၊
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ၊ ကြိုးစားကြည့်တဲ့ သဘောပါ ။
သံသယ တော့ ၊ အဘ လဲ ရှိတယ် ကွယ် ။
တကယ်လို့ သူတို့ဘက်က လူများစု ဖြစ်လာပြီး အားသာနေတဲ့ အချိန်မှာကော ၊
သူတို့တွေက ကိုယ့် အပေါ် အဲဒီလို သက်ညှာတဲ့ သဘောထား ရှိပါ့မလား ဆိုတာ ။
သူတို့ဖက်က ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်တဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ တွေကို ၊
ကမ္ဘာ အနှံ့မှာ ၊ မကြာခဏ တွေ့နေရတော့လည်း ၊
အဘ လဲ ၊ သံသယ တော့ တော်တော်လေး ရှိတယ် ကွယ် ။
ပညာ ရေချိန် အားနည်းလို့ ဖြစ်နေရတာပါ လို့ပဲ ၊ ယူဆနေမိသေးတယ် ။
အဆိုးဆုံး အချက်ကတော့ ၊ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ၊
မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ်နှိုက်က ၊ ရှုတ်ချတာ သိပ် မတွေ့ရဘူးကွယ် ။
အဲဒီ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ၊ အရမ်းဆိုးတာပဲ ။
ဖတ်ဖူးသလောက်.. မက္ကာမြို့အထိ.. မွန်ဂိုတွေကျူးကျော်ပြီး.. မီးရှို့လူသတ်ဖူးတယ်..။
အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံတွေဟာ.. ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ… ကမ္ဘာတန်းအောက်ကျနေခဲ့ကြရတာပေါ့..
ရေနံက.. ဘယ်သူကဖန်တီးထုတ်သလည်းဆိုတော့.. ခရစ်ယန်အများစုတိုင်းပြည်တွေကပါ…
ကမ္ဘာ့ရေနံအထွက်ဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့.. ဆော်ဒီ၊ကူဝိတ်တို့.. ဘယ်သူ့လက်အောက်ကျနေသလည်း.. တွေးကြည့်ဖို့ပါပဲ..
အကြမ်းဖက်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့.. တွန်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ.. ဘာလို့ဘယ်လိုကြောင့်…ဖြစ်လာသလည်းကြည့်ရင်..အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်..
နိဂုံးချုပ်ရရင်.. ကမ္ဘာ့ဦးရေသုံးပုံ၁ပုံဟာ.. ခရစ်ယန်တွေဖြစ်နေမြဲဖြစ်ပြီး.. မွတ်ဆလင်ဟာ.. နောင်၂၀နှစ်လောက်မှာတောင်မှ.. ကမ္ဘာ့လူဦးရေ.. ၄ပုံ၁ပုံလောက်ရောက်မယ်ဆိုကြပါတယ်..
ကျော်ဟိန်းလို လက်ချောင်းထောင်ပြောပြရရင်.. လက်၁၀ချောင်းကို.. ၁၀ခါ.. ၁၀ခါ..။
World population: 32% Christian, 23% Muslim
CWN – December 18, 2012
The world population is 32% Christian, 23% Muslim, 15% Hindu, 7% Buddhist, and 0.2% Jewish, according toanew demographic study from the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life.
The Pew Forum found that 157 countries haveamajority Christian population, while 49 haveamajority Muslim population. The five nations with the largest Christian population are the United States, Brazil, Mexico, Russia, and the Philippines.
The average Muslim (23) is younger than the average Christian (30): worldwide, the median age is 28.
ခရစ်ယာန်မွေနှုန်းနဲ မွတ်စလင်မွေးနှုန်းလေးလုပ်ပါအုံး သဂျီးရယ်
နောက်ပီး အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာကလဲ နောက်လာမယ့်မျိုး ဆက်တွေအတွက်လို့ မြင်မိပါတယ်
လက်ရှိမှာ မွတ်စလင်ထက် ဆိုးနေတာလေးတွေလဲရှိပါရဲ့
တခြားမကြည့်နဲ့ မန်းမှာဆို တမြို့လုံးတရုတ်
အသစ်ဆောက်မယ့်မြို့ သစ်မှာ တရုတ်အင်္ဂါရပ်အပြည့်အစုံ
အဲ ၊ ကို အောင်ပု ပြောတာကို အခုမှ သေချာ ပြန် စဉ်းစားမိတယ် ။
အဘ အခု ရန်ကုန် မှာ နေတာက မိဘ အိမ် မှာ နေတယ် ။
၁ ။ မိဘ အိမ် ရဲ့ ညာဘက်မှာ ၊ အဘ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ် ၊
အိမ်စရိတ်လေး ရပါစေ ဆိုပြီး ငှားစားထားတယ် ၊ ကိုရီးယားတွေ နေတယ် ။
၂ ။ အဘ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ရဲ့ ညာဖက်မှာ ၊ မွတ်ဆလင် ကုလားတွေ နေတယ် ။
၃ ။ အဘ တို့ ရှေ့တည့်တည့်မှာလည်း ၊ မွတ်ဆလင် ကုလားတွေ နေတာပဲ ။
၄ ။ အဘ တို့ ဘယ်ဖက်မှာ နိုင်ငံခြားသား တရုတ်တွေ နေတယ် ။
၅ ။ အဘ တို့ နောက်ဖက်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံသား တရုတ်တွေ နေတယ် ။
၆ ။ အဘ တို့ မျက်စောင်းထိုးအိမ်မှာ ကိုရီးယား + မွန် / ကရင်မ လင်မယား နေတယ် ။
အဲဒီတော့ သတ္တု ချ ကြည့်လိုက်ရရင် ။
၁ ။ အဘ တို့ ရန်ကုန် အိမ် ဟာ လူမျိုး ပေါင်းစုံ ၊ နိုင်ငံသား ပေါင်းစုံ ရဲ့ အလယ် မှာ ရှိနေတယ် ။
၂ ။ ဒါပေမယ့် ၊ အဘ ရဲ့ အိမ်ချင်း ကပ်ရက် တွေထဲမှာ ၊ ဗမာ မပါတာ တွေ့ရတယ် ။
၃ ။ အဘ တို့အိမ်ဟာ မွတ်ဆလင် ကုလား အိမ် နှစ်လုံးကြားမှာ ရှိနေတာ တွေ့ရတယ် ။
အိုးးးးးးးး ၊ ထင်သလောက် မဆိုးပါဘူးကွယ့် ။
တခါတရံ potential ဆိုတာရှိတယ်နော
အဲဒီ potential ကြီးကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
” အဲတော့ လူတွေက လက်ဦးမှုရယူပြီး သတ်တယ် ”
ကို nicolus agral ရေ ။
လောကကြီးမှာ သတ်တဲ့နည်း တစ်ခုတည်း နှင့် ၊
ဖြေရှင်းရတာ မဟုတ်ဘူးလေဗျာ ။
မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေဟာ ကျားတွေ မဟုတ်သလို ၊
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ကမှ ၊ လူတွေ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ပုခုံး နှစ်ဖက်ကြားမှာ ခေါင်းပေါက်ပြီး မတ်မတ် လျှောက်ရင် လူချင်း အတူတူပါပဲ ။
ကျနော်တို့က ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိဘ နှစ်ပါးက မွေးလာလို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဖြစ်ရသလို ၊
သူတို့မလဲ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် မိဘ နှစ်ပါးက မွေးလာလို့ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် ဖြစ်ရတာပါ ။
နည်းပေါင်းစုံ ရှိတဲ့ အထဲမှာတောင်မှ ၊ အကြမ်းအားဖြင့် ၊ ၉၆၉ မှာတောင်မှ ၊
၇၈၆ ဆိုင်တွေကို မဝယ်ဖို့ အားမပေးဖို့ အထိက နားလည်ပေးလို့ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ၇၈၆ ဆိုင်တွေ အိမ်တွေ ကို ဖျက်တာ ၊ လူသတ်တာတွေကိုတော့ ရှုံ့ချပါတယ် ။
ဒါတွေကို ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အစုအဝေးကြီးက လုပ်တာ ဆိုရင်တော့ ၊
အဲဒီ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အစုအဝေးကြီးကို အကြမ်းဖက်သမား ၊
ရာဇဝတ်ကောင်တွေ အဖြစ် ကျနော်ကတော့ ရှုံ့ချမှာပါပဲ ။
၇၈၆ ဆိုင်တွေက မဝယ်တာ တစ်ခုတည်းနှင့်တင် သူတို့ အထိနာလှပါပြီ ၊ တော်ရောပေါ့ ။
” အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ကရော ဘယ်နား သွားထားမှာတုံး ”
နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပြီးမှ ရမယ်ဆိုတဲ့ ၊
အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားမျိုး ကိုတော့ ၊ ဘယ်နားမှ သွားထား မနေပါနှင့်ဗျာ ။
မြောင်းထဲသာ ၊ သွားလွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတော့ ။
တကယ်က အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား နှင့် ၊
မွတ်ဆလင်တွေကို မုန်းတာနှင့် ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ။
မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ နိုင်ငံ မဟုတ်သလို ၊
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာလည်း ၊ ဗမာ တစ်မျိုးတည်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ၊ ဗမာ အပြင် ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ၊ တရုတ် ၊ ကုလား က အစ ၊
ဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် နေထိုင်လာခဲ့ပြီး ၊ အဲဒီ လူမျိုး ပေါင်းစုံ က ၊
တစ်ဦးတစ်ယောက် ခြင်းစီက ၊ အတူ တကွ ၊ ပူးပေါင်း ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံ ပါ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ၊
မြန်မာ နိုင်ငံ ဟာ ၊ ဗမာ လူမျိုး တစ်စုတည်းက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ မဟုတ်သလို ၊
မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ၊ ဗမာ လူမျိုး တွေရဲ့ Idea တစ်ခုတည်း နှင့်လဲ ၊
စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး ။
ဒီ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံသား လူမျိုး ပေါင်းစုံ ရဲ့
ရင်တွင်း ဆန္ဒတွေ နှင့် စုပေါင်း တည်ဆောက်ရမှာပါ ။
ဒီနေရာမှာ ၊ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ၊
” Majority Rule, Minority Right ” အရ ၊
ကိုယ်က အများစုကြီး ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ၊
အနည်းစု ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထိပါးစေပြီး ၊
ကိုယ့် ဆန္ဒကို အကောင်အထည် မဖေါ်ရပါဘူး ။
မြန်မာ မွတ်ဆလင် တွေဟာလည်း ၊ တန်းတူ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး ၊
သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဟာလည်း ၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ထဲမှာ ပါတာပါပဲ ။
ဗမာ လူမျိုး တစ်မျိုးတည်း ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်း ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုမှ ၊
အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ဆိုပြီး ရောချလို့ မရပါဘူး ။
( ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ ၊ စစ်တပ် ရဲ့ သဘောထားလေးကို ချီးကျူး ပါရစေ ။
ရခိုင်း အရေးအခင်း တော်တော်ကြမ်းလာတဲ့ အချိန်မှာ ၊
မြဝတီ ကနေပြီးတော့ တပ်မတော် ရဲ့ သဘောထား ကို တင်ပါတယ် ။
” တပ်မတော် သည် ၊ ဘယ်ဖက်ကိုမှ မလိုက် ၊
တပ်မတော် သည် ၊ အမှန်တရားဘက်ကပဲ ရပ်တည်မယ် ” ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ ။
အဲဒီ စကားသံ ထွက်လာပြီး နောက်မှာမှ ၊
အကြမ်းဖက်နေတဲ့သူတွေ ၊ တော်တော်များများ ရပ်သွားတာပါ )
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနယ်နမိတ်..မြေပိုင်နက်ထဲမွေးဖွားသူ… မည်သူမဆို(မည်သည့်လူသားမဆို) မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်… ပဲ..
ဒါကို ဥပဒေအဖြစ်ပြုပေးဖို့.. အခုလည်းကြိုးစားမယ်….နောင်လည်းကြိုးစားမယ်..
မြန်မာ့မြေထဲ… မွေးသူနိုင်ငံသားတွေက.. သူတို့ဖာသာ.. ဘယ်နာမယ်တပ်တပ်..
ဘင်္ဂလီမကလို့.. ရိုဟင်ဂျာမကလို့.. ရိုဘင်ဂလီဂျာပေးလည်း.. အများဆန္ဒအတိုင်း… ဖြစ်စေပဲ..။
သူ့တို့အုပ်စု.. သူတို့ကိုယ်သူတို့..သူတို့ကြိုက်တဲ့နာမယ်ပေးတာ.. ကိုယ်က..ကိုယ့်လူမျိုးက.. ဘာလို့လိုက်ကန့်ကွက်နေကြသလည်း.. တွေးကြည့်လို့ကိုမရ…။
.. ဘေးအိမ်ကမိသားစုက.. ကလေးမွေးလို့..သူတို့သားနာမယ်.. မောင်နန္ဒပေးရင်.. သွားကန့်ကွက်ပြီး အဲဒီနာမယ်.. မပေးရဘူးလုပ်လို့ရသလား.. တွေးကြည့်ကြဖို့ကောင်းတယ်..
လမ်ဘေးကျနေတဲ့..အမှိုက်ကလေးတွေ.. တယောက်တလက်.. တခုတဖတ်စီ.. ၀ိုင်းကောက်ကြစေချင်ကြောင်း…။
အယ်..သဂျီးရယ်..အဲဒီ ဆိတ်ဓာတ်ကြိုက်တယ်..ကြိုးစားကြိုးစား…ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကတော့ မကြိုးစားပဲနဲ့ အထုမှကြိုးစားရတာတုန်း…အဒူလာ သဂျီးရယ် :hee:
ဘာလို့ လိုက်ကန့်ကွက်နေကြသလဲဆိုတော့…Dလိုရှိတယ်သဂျီးရဲ့..ကြောက်လို့ဗျို့! ကြောက်လို့! အခြေအနေဂ ဒီလိုဖြစ်နေတာ…အပြင်ကလူ…အထက်မှာ နေတဲ့လူတွေက တော့ဘာသိမလဲ။။ မသိတာများသား…
သဂျီးပြောသလို…ကိုယ့်အိမ်မှာကို နာမယ်ပေးတာဆို ဘယ်ပြောမတုန်းဗျ။ အခုဟာက သူများအိမ်ပေါ်တက် နာမယ်ပေးနေ
တော့ မခက်ဘူးလားနော်။ ဥပမာ သဂျီးရယ် ဂျာတစ်ယေက်က သူဂျီးအိမ်ကို လာပြီး “ခင်ညားက သဂျီး ကျုပ်က သဂျာ နာမည်ခပ်ဆင်ဆင် ညီကိုဒွေပဲလေ..ဒီဖက် rumpus room လေးထဲမှာကျုပ်နေ ဘရဇေဗျာ။” အဲ..အဲဒီက တဆင့်တက်…သဂျီးရဲ့အ၀ှာလေးကို “ အဲ ကိုယ်တွေဂညီကိုဒွေလေ..ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေငြိုးဒေလို ဆက်ဆံပါကွယ်”
နောက်ကျတော့ တဆင့်တက် “အမှန်က ဂျီးလေးဂို ကိုယ့်အမေအဖေက မွေးချားထားတာကွ..ကိုယ့်ကျေးဇူးတွေ
..သူ့အပေါ်မှချိတယ်ကွယ့်။ ဒါဂျောင့် ကိုယ့်ဂို အိမ်ဘော်ခေါ်တင်ထားတာလေ”။ ဒီတော့ ဒဂျီးအ၀ှာလေးကလည်း အဟုတ်မှတ်ပြီး ကျေးဂျူးတွေဆပ်။ အဲ…အဲသလို အယုံသွင်း။ အဲနောက်တခါသူဂျီးတို့ ဆီကထွက်လာတာလေးတွေကိုလဲ..
“ အဲ တားတို့ တာမီးဒို့…ဦးဦးကမှ တားဒို့ရဲ့ ဒယ်ဒယ် အရှစ်..ဟိုလူဂျီးကဟုတ်ဘူး”။ အဲဒလို ဂျပိုးကနေ လိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်
ဒါဒွေက အဲသလိုတွေ အဲသလိုတွေ ဖြစ်နေတာပါသဂျီးရယ်..နော်နော်..သေချာစဉ်းစားပါ သဂျီးရယ်..ဘယ်သူတွေက လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာလည်း။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဘယ်သူတွေက လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာလည်းဆိုတဲ့ အထဲမှ သဂျီးတို့နဲ့ အတိုက်အခံ အမြဲပြောနေတဲ့ အင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့ လူတွေကို မဆိုလိုပါဘူး။ အောက်ခြေမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံ အသတ်ခံ..နေရတဲ့ လူတွေကိုပြောတာပါ။ အဲဒီအောက်ခြေ လူတန်းစားထဲမှာ သူဂျီးသမီးလည်းမပါသလို..သဂျီးမိန်းမနဲ့ ခယ်မလည်း မပါသေးသလို..ကျွန်တော့ဆွေမျိုးထဲကလည်း မပါသေးပါဘူးဆိုတာ သိပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့လည်းလေ..သဂျီးပြောသလို..လူဆိုရင် လူလိုစဉ်းစားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်…နှစ်ဖက်မျှစဉ်းစားပြီး ပြောသင့်တယ်ထင်တယ်နော်။ လူ့အခွင့်အရေးကို အော်တယ်ဆိုတာက သူ့နေရာနဲ့သူ ရှိမှာပါ။ အမေရိကားမှာ မက်ဆီကန်တွေ အတွက်၊ (သို့)ဗမာတွေအတွက် သဂျီးအော်ရင်တော့ တစ်မျိူးပေါ့ဗျာ။ အခုဟာက အမေဂျစ်ကားက လူက မြန်မာပြည်မှာ ဂျာတွေ လူ့အခွင့်အရေးရဖို့ အကြောင်း ပြောတယ်ဆိုတော့..စိတ်ချသဂျီး… သဂျီးနဲ့ FR ပြောသမျှဟာ မီးငြိမ်းအောင်မဟုတ်ပဲ
မီးတောက်အောင်လုပ်နေတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရေးထားတာတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စစ်နော်..အလွဲတွေများနေတယ်..ထင်တယ်။
ဗျို့ သမဒဂျီး FR ဟိုးအရင်က ခင်ဗျားဂျီး ရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်တွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော
မေ့သွားမှာ စိုးလို့ပါ ဆိတ်လဇိဂျီးရေ့
အစကတော့ ပြန်ရှာတင်ပေးမလို့ဟာ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ မရှာဖြစ်တော့တာ
အင်မတန် စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်လှဒဲ့ ဘုရားဒါယကာဂျီး
အသိဥာဏ် ဗဟုသုတနဲ့လည်း အလွန်အင်မတန်ပြည့်စုံလွန်းလှတဲ့ သမဒဂျီး F R ခင်ဗျား…..
ခင်ဗျား အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ကြည့်ပါ့လား အဲ့ဒီ ဘင်္ဂလီတွေကို
ပြီးတော့ သမီးတော်လေးတွေနဲ့ ပေးစားလိုက်
တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အားတိုင်းမွေး နေမှာမြင်ယောင်သေးဗျာ
တစ်နှစ် တစ်သား မပြောနဲ့ အမွှာနဲ့ဆိုရင် သုံးလေးသားလောက်ကျနေမယ်နော
ကိုရင်တို့ မြန်မာဒွေလည်း ခေတ်မကောင်းတော့..
ဟိုဒီနိုင်ငံသွားပီး.. ဟိုကြံဒီကြံရင်း နိုင်ငံသားဖစ်တဲ့လူက ဖစ်၊
ဂလင်းကဒ်ရသူကရ.. ပီအာရ် ရသူကရနဲ့ နိုင်ငံမကြီးတကြီးနဲ့
ကြီးကြီးတွေမှာ နေနေတာပဲ… (ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးထဲမှာလဲ အဲ့ဒီလူတွေ
ရှိနေတာပဲ) ထင်တာက မြန်မာတွေ တကယ်ကြောက်တာက
ရိုဟင်ဂျာ.. ဘင်္ဂလီမဟုတ်ပါဘူး.. မွစ်စလင်ဘိုင်းရပ်စ်..။ ကလားကျင့်ကလားကြံ ကလားဥာဏ်တွေကို
ကြောက်တာပါ။ ၀ါးမြိုခံရတဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ရှိတာဂိုး.. အဲ့ဒလော့ လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းမှာ
ကောင်းဒဲ့လူချိသလို မကောင်းဒဲ့လူလည်းချိဒါပါပဲ အနည်းအများကွာသွားဒါဘာ..
ဘင်္ဂလီတွေကိုလည်း အကန့်လေးတကန့်ထဲ ထည့်ပီးသာ ကင်းကင်းနေခိုင်းရင်
အဆင်ပြေနိုင်လောက်ပါရဲ့.. ကျလိ.. ကျလိ..
ပြောကြတာဘဲမဟုတ်လား ဟိုးးးးးးးးရှေးယ္ခင်ကတည်းက အတူတူနေလါဂျဒါဘါဆိုပီး
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆို သိတာဟုတ်ဘူးလေ အသားမဲရင်
ဗဟုသုတနည်းတယ်ပြောပြော မိုက်ရိုင်းတယ်ပြောပြော ကိုယ်သိထားတာက
သဘောတွေကျပြီးကျန်ခဲ့တာ အမှန်က ကိုယ်ငတ်သွားတာကိုယ်မသိဘူး
နောက်မှခွဲပြီးသိလာတယ် ဒါ ဟိန္ဒူ ဒါ အစ္စလာမ် ဆိုပြီးတော့
သူ့ဖါသာ ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ် အစ္စလာမ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး
သူ့ဖါသာနေ ကိုယ့်ဖါသာနေ သူ့အလုပ်သူလုပ် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာဘဲ
သူတို့ သူများကြားနေခြင်သလိုနေ ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဘယ်သူမှသူတို့ကိုဘါမှမလုပ်ဘူး
သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ဘာသာတိုင်းရှိပါတယ် အဲ့သည်သတ္တဝါတွေက သူများနဲ့တူလို့လား
နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေနေတဲ့ ဗမာတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားက ဌာနေတွေကို အုပ်စုဖွဲ့ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်တာမျိုးကြားဖူးကြပါလား
နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေနေတဲ့ ဗမာတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားက ဌာနေတွေရဲ့ နေရာတချို့မှာ ဗမာတွေ များလာလို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတာတွေ ကြားဖူးကြပါလား
နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေနေတဲ့ ဗမာတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားက ဌာနေတွေလိုပဲ နာမည်အသစ်တစ်ခုထွင်ပြီး လူမျိုးစုအသစ်အနေနဲ့ ပြည်နယ်တောင်းတာ ကြားဖူးကြပါသလား
နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေနေတဲ့ ဗမာတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားက အစိုးရနဲ့ ဌာနေပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲစည်းတယ်လို့ ကြားဖူးကြပါလား
နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေနေတဲ့ ဗမာတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားက ယဉ်ကျေူမှုတွေကို လုံးဝလက်မခံပဲ ဗမာမျှဗမာပဲဆိုပြီး ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အဲဒီနိုင်ငံထဲ အတင်းအကျပ် သွတ်သွင်းတာမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ ကြားဖူးကြပါသလား
ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကို လိမ်လည်အချိုသပ်ပေါင်းဖို့ အယုံသွင်းပြီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့ ဟိန္ဒူကျမ်းစာတွေမှာရှိပါသလား
ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကို လိမ်လည်အချိုသပ်ပေါင်းဖို့ အယုံသွင်းပြီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့ ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိပါသလား
ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကို လိမ်လည်အချိုသပ်ပေါင်းဖို့ အယုံသွင်းပြီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့ ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေမှာရှိပါသလား
ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကို လိမ်လည်အချိုသပ်ပေါင်းဖို့ အယုံသွင်းပြီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့ အစ္စလာမ်ကျမ်းစာတွေမှာရှိပါသလား
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရား အလုယက်ခံ အသတ်ခံလိုက်ရသူတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရား အလုယက်ခံ အသတ်ခံလိုက်ရသူတွေအတွက် မတရားလုပ်သွားတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ရှုတ်ချပါတယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရားလုယက်ခံ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေ အတွက် တရားမျှတမှုကို ဥပဒေဘောင်ထဲက ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ တက်နိုင်တဲ့ဘက်က စတင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရားလုယက်ခံ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ဘေးလွတ်ရာကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကို လေးစားပါတယ် ချီးကျူးပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မတိုင်ခင်က ဗမာပြည်မှာ အဲလို လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေကို မီးရှို့လုယက်သတ်ဖြတ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်များ ရှိခဲ့ပါသလဲ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မတိုင်ခင်က မိတ္ထီလာမှာ အဲလို လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေကို မီးရှို့လုယက်သတ်ဖြတ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်များ ရှိခဲ့ပါသလဲ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရားလုယက်ခံနေရသူတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များက အသက်စွန့်ကာကွယ်ခဲ့တာ အထင်အရှားကိုရှိပါတယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်မှာ မတရားလုယက်ခံနေရသူတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဒါယကာ ဒါယိကာမတွေက အသက်စွန့်ကာကွယ်ခဲ့တာ အထင်အရှားကိုရှိပါတယ်
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်ဟာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမဟုတ်ပါ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်ဟာ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းမဟုတ်ပါ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်ဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု မဟုတ်ပါ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်ဟာ အကြံယုတ်မာပက်စက်တဲ့ သူတွေရဲ့ ထောင်ချောက်လှည့်ကွက်ပါ
မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် လို့
(လုပ်သူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နာမည်တပ် ခံရသူကို မွတ်စလင်ဘာသာဝင် နာမည်တပ်) ပြောနေတဲ့သူတွေဟာ
စင်စစ် နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်သူတွေနဲ့ အကြံတူတွေပါ
အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ သန်းခေါင်စာရင်း မြန်မြန်စစ်ကြပါစို့
Hawdeka Khalaylay FROM FB
FR ခင်ဗျ ဖုန်းကနေမန့် တာဆိုတော့အကျယ်မန့်တော့ဖူးဗျာ
ရိုဟင်ဂျာခေါ်ခေါ် ဘာပဲခေါ်ခေါ် ဥပဒေနဲ့ညီရင်နိုင်ငံသားပေးဖို့ထောက်ခံပါတယ်
ဒါပေမယ့် တခြားနိုင်ငံတွေမှာလို စော်ကားသောင်းကျန်းလာနိုင်မယ့်ရန်ကို
ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းလေး အကျယ်ဆွေနွေးစေချင်ပါတယ်
ကိုယ့်လူတွေပဲထောင်းဖို့ စဉ်းစားမယ့်အစား လက်တွေ့  ပြသာနာ ကိုရှင်းမယ့်နည်းလေးပေါ့
တိုင်း မက်ချင်း ထွင်ပြီး
ရာဇဝင်ထဲက မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော် ကို မန်းတလေးမြို့ ကို ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုသာ စစ်သွားခင်းလိုက်ပါတော့
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ဆိုလို့ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ် အဘဖောရေ…ကမ္ဘာကြီးကိုပါတ်ခဲ့တဲ့ သဘောင်္သားအဘဖော.ဘယ်နှိုင်ငံရောက်ရောက် ဒီမိုကရေစီလွန်စွာထွန်းကားနေတဲ့ နှိုင်ငံမှာပဲနေနေ ဟုတ်စွအဆုံးကမ္ဘာအပြင်ဖက် ကိုရောက်ပြီး တစ်ခြားဂြိုလ်တစ်ခု့ကိုပဲ ရောက်ခဲ့ ပါစေ..အဘဖော..မက္ကာ ကိုတော့ မေ၇ာက်ဘူးလောက်ပါဘူး..ရေးခဲ့သမျှစာတွေ လေးစားတယ် ဂုဏ်ယူတယ် လိုက်နာတယ်..အခု့အဘဖောပြောတဲ့ (စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၁ ) ( ရုရှ စကား – ၂ ) အတွက်..အဘဖော မက္ကာမှာရှိ့တဲ့ ဝတ်ကျောင်းတော်ထဲမှာ မြန်မာပြည်ဖွါး ဗုဒ္ဓဘာသာ (ကမ္ဘာပါတ်ချီးယိုခဲ့တဲ့) သူပါ..နှိုင်ငံတစ်ကာမှာ အမှတ်တရ(မြန်မာပြည်သား အချင်းချင်း အဝေးရောက်ဖင်ခေါင်းကျယ်ရအောင်) ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ပြီးပြီ ခု့ မက္ကာမှာ ရှိ့တဲ့ မင်းတို့ဝတ်ကျောင်းတော်မှာ ငါ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ဘယ်လိုပြောပြောဗျာ ဓါတ်ပုံသာ ရအောင်ရိုက်ခဲ့ပေးပါ…အဘဖော ပုံကို ကျနော် အညာသား တစ်နေ့ ဦး(၃)ကြိမ် ချကန်တော့အိပ်ပါ့မယ်.အဲ့ဒါပြီးမှ့ အဝေးကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စ အဘဖော တရားဟောပါ..ကျနော်တို့ တက်သစ်စလူငယ်တွေ မိ့ဘစကားထက် ပိုလိုက်နာ့ပါမယ်.အော်…လည်ပင်းလေးတော့ မသွားခင်စမ်းထားနော်..မဟုတ်ရင် အဘဖောမွေးခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကမြန်မာလူမျိုးတွေ ခံစားနေရတာ ဒီမိုကရေစီလား..ဘာလား..ဘာ..ဘာ…ဘာ..ဘာဆိုတာ မသိ့သွားလိုက်ရပဲ နေမှာ စိုးလို့ပါ ဒါ…အညာသား…စေ..တ…နာ.
ပြောအုံးမယ်…အမေဂျစ်ကားတို့..အော်စတေးလျ ယူကေ..တို့ဆိုတာက လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတယ်..လုံခြုံရေးအပြည့်ရှိတယ်
တောင်းထားတဲ့ သူဆိုရင် ခိုလှုံခွင့်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်။လုံခြုံရေးကလည်း ကောင်းတော့ ပြည်သူလူထုက ဘာမှသိပ်ပူစရာမလိုဘူး။ အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်ထွက် ဇီးသီးသည် မဗျိုင်းတွေများသလို…’Let them eat cake’ ပြောတဲ့ Queen Marie Antionette လို(တကယ်တော့ သူမပြောခဲ့ပါဘူးတဲ့)လူစားမျိုးတွေလည်း များချက်ကတော့။ ကျုပ်ကတော့
သူများအကြိုက်လိုက်မပြောနိုင်ဘူးဗျို့။ ဘယ့်နှယ့် တဖက်သတ် အခုကြမှ လူကြီးလူကောင်းပုံ လုပ်နေကြတယ်။ ပြောပါနှစ်ဖက်မျှပြောပါ။ ကျုပ်ဗမာပြည်မှာ မနေလည်း ကျုပ်ပြောစရာရှိတာတော့ ပြောရမှာပဲ..သူများကြိုက်ချင်မှတော့ ကြိုက်မယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ အမေစုနဲ့ လက်ရှိအစိုးရ ပြတ်ပြတ်သားသား မလုပ်သရွေ့တော့ ဗမာတွေ တော့ခံဖို့သာပြင် ပေတော့။ ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ မြန်မာက ဘယ်လို မျက်နှာပြ မလဲတဲ့လား။ ဘယ်တုံးကများ ဒီနိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာက ပြလို့ကောင်းအောင် လှခဲ့ဘူးလဲ။ သူကြီးတို့ FR တို့လို လူမျိုးတွေကရော ပြည်ပရောက်ရင် ငါတို့ နိုင်ငံက ကောင်းပါတယ် အစိုးရကသာ မကောင်းတာလို့ ပြောဘူးသလား။ ဒါမှမဟုတ် အိုး ဗမာတွေမကောင်းဘူးလို့ပဲ ပြောဘူးသလား ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စဉ်းစား။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝတဲ့ ၊
တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်..နိုင်ငံသားတွေအတွက် အစတောင်မစရသေးဘူး..တစ်ခြားလူတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေးအော်
ခံနေရတာက အရင်… ဆော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်နိုင်ငံ မဖြစ်ချင်လို့..လူတွေကအတိုက်အခံလုပ်နေရတာပေါ့..
တစ်ချိန်လုံး မြန်မာပြည်ကို ၀င်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ သူတို့ဘာသာဝင်တွေ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီ ပုံပေးဖို့ ၀န်မလေးတဲ့
နိုင်ငံတွေ။ ဗမာပြည်နဲ့တစ်ခြားနေရာတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တုန်းကမှ ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေ။ အခုကြတော့ သားသည်အမေတွေလို
မျက်ရည်စက်လက်နဲ့။ လူဆိုတာ ငွေနဲ့လိုက်နိုင်ရင် ဘုရားတောင် ပြောင်းပြီးကိုးကွယ်နိုင်တယ်။ တကယ်တော့ ငွေဟာ ဘုရားတကာတို့
ထက် အစွမ်းထက်တယ် ပဲဆိုရတော့ မလိုဖြစ်နေပြီ။
အဘ အတွက်ကတော့ ဟုတ်မှာပေါ့လေ..ဗမာပြည်မှာလည်း ကောင်းကောင်းနေရ၊နိုင်ငံခြားမှာ လည်းကောင်းကောင်းနေရ
ဒေါ်လာတွေလည်း အများကြီးစား ဆိုတော့…ဒါပေသိ..ဗမာပြည်သား အများစုအတွက်တော့…ဒီမိုကရေစီတို့ လူ့အခွင့်အရေး
တို့ဆိုတာ..သူများအတွက်လား ငါတို့ အတွက်လား ဝေခွဲမရဖြစ်နေတုန်းပဲ ထင်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ဆိုတာဘာလဲ။ တနိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံတူ တာမဟုတ်ဘူး။
အော်စတေးလျ နဲ့ နယူးဇီလန်နဲ့တောင် မတူဘူး။ အောက်မှာ သွားကြည့်ပါ gay marriage ဟာ နယူးဇီလန်မှ တရားဝင်ဖြစ်သွား
ပြီ အော်စတေးလျမှာ ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲ။ အမေရိကားမှာတောင် တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာမတူဘူး။
အဲဒီတော့ သဘောက ဘာမဆို အဲဒီ နိုင်ငံဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ လူအများ သဘောတူမှုမတူမှုနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဘ..ဟုတ်ပါတယ် “သူဖုန်းစား” တို့ “အိမ်ရှင်တို့” “ပေးတာယူ ကျွေးတာစား” တို့ဆိုတာ
မသုံးသင့်ပါဘူး…အလွန်ရိုင်းပါတယ်။ အဲသလိုပြောရအောင်လည်း..သူတို့ကကျွေးတာလည်း မစားခဲ့ဘူး ပေးတာလည်း မယူခဲ့ဘူး။
သူတို့ကသာ…ယူသွား စားသွားခဲ့တာကလား..သေသေခြာခြာလည်း ပြန်စဉ်းစားကြအုံး။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ရိုင်းရာလည်း
ဘယ်သူတွေက အပြစ်မရှိပဲ အပြစ်ဒဏ်ခံရတာပါလည်း အဘ?? ဒါက ဘယ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီး ပြောတာလဲ?
ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝသောနိုင်ငံတွေမှာရော မရှိဘူးလား? ဂွာတီမာလာ အကျဉ်းထောင်မှာ အပြစ်မဲ့ သူတွေ
ခံလိုက်ရတာ တွေ့မှာပါ။ အဲ..အဘနဲ့ သဂျီးက အဲသလို မဖြစ်အောင် အစွမ်းကုန်တားဆီးချင်သပ ဆိုရင်တော့
သွားလုပ်ကြပါ..ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ ဂေဇက်ပေါ်မှာလည်း အတွေ့အကြုံလေး ပြန်ဖြန့်ပေးအုံးနော်။
မှန်တာပေါ့ အဘရယ်ပေးသင့်တဲ့ လူကိုပေးရမှာပေါ့။ ဒါတွေကတိုင်းပြည်က လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
မပေးသင့်တဲ့ လူလည်းမပေးဘူးပေါ့ဗျာနော်.. ဘင်္ဂါလီတွေ အပေါ်ဖိနှိပ်တာလည်း နေရာဒေသ
အလိုက်ရှိမှာပါ..ရခိုင်တွေ အဖိနှိပ်ခံရတဲ့နေရာတွေကို အဘမရောက်ခဲ့တာ..တော်တော်ဝမ်းနည်း
စရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာနေခဲ့တဲ့ NGOကလူတွေ(မဆလ မဟုတ်သူ)၊ သို့မဟုတ် အစိုးရအလုပ်
ဖြင့်တာဝန်ကျသူများ ဥပမာ ဆရာဝန်တွေကို မေးကြည့်ပါ ဖဘပေါ်မှာလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်စောင်းနင်းတော့ မပြောစေချင်ဘူး။ပါ။ အဖြစ်မှန်သူတို့ သိကြပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြောမယ်…နယ်က ရခိုင်သူတစ်ယောက်က စစ်တွေမှာတက္ကသိုလ်သွားတက်တော့
သူက ရခိုင်သားတစ်ချို့က ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတွေ အဲသည်လူတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါတွေ တွဲရိုက်
တာတွေ့ရင်..လာပြီး ဓာတ်ပုံတွေဖျက်ဆီးပစ် ဓာတ်ပုံဆရာကိုရိုက်ပေးရကောင်းလားဆိုပြီး ရန်တွေ့
ကောင်မလေးတွေကိုလည်း နောက်မရိုက်ဖို့ပြော အဲသလိုမျိုးတွေတွေ့တော့ သူကတွေးတယ် လူအချင်း
ချင်း ဘာလို့ အဲသလိုလုပ်သလဲပေါ့။ အဲနောက်ကျတော့ ကျောင်းမှာပွဲလုပ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အပြန်အလှန် အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေလဲတော့ သူတို့က ကောင်မလေးတွေကိုဘာပေးသလဲဆိုတော့
အမျိုးသမီးနေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းပေးတယ်တဲ့(အတောင်ပံလေးနဲ့လေ)။ဆိုတော့ကာ အဲသလိုလေးတွေကလည်း
ရှိတယ်လေ။ အဲသည်မှာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဟာ ပြန်တံတံနံ့တံ့တံ့ လည်း မရှိပါဘူး(အခုတော့မသိ
ပါ) အဲသလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေအရှက်ကွဲတာပေါ့။ အရမ်းရင်းနှီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေ
ကနောက်ပြီးတော့ ပေးတာမျိုးတော့ အခုခေတ်ရန်ကုန်မှာ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ သာမန် အတန်းဖော် မြန်မာ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတော့ ဘယ်သူမှပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဘတို့ နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ အဲသလို
သွားပေးရင် pervert လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ပြောချင်တာက တဖက်သတ်ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိနိုင်သလို
အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဖိနှိပ်ထားတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမရာမာကြီးတွေဟာ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ပြန်နေနိုင်လောက်အောင်
အထောက်အထားတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ သေသေချာချာလေ့လာကြည့်ပါအုံး။ များသောအားဖြင့် ဟိုဖက်မှာ
နေတာလည်း သူတို့က ဘုရားကျောင်းကန်အစွဲတွေနဲ့ နေနေကြတာလည်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြဖို့
နာက်ပြီးတော့ လက်ရှိ ရခိုင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာ ၊
ဒါကတော့ သူ့နိုင်ငံဥပဒေလေ ဘယ်တုန်းကမှ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ကို ဘာသက်သေအထောက်အထားနဲ့
ပြမလဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေ အခွင့်သင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာနေထိုင်နေသော ထိုရိုဟင်
ဂျာဆိုသော သူများဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီး ဘုတ်တွေနဲ့ သွားနေကြတယ်လေ။ လက်ခံနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက လက်ခံတာ
နိုင်ငံသား လျှောက်ခွင့် ပေးပါတယ်
ဒါက သူ့ကိစ္စလေ..ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်လစာဝင်ငွေဟာ နော်ဝေ ကလူတစ်ယောက်
တစ်ရက်လုပ် တာလောက်ရောရှိရဲ့လား အဘရယ်။ ပြီးတော့ သူ့နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ဆိုတာကော လွယ်လွယ်
နဲ့ရပါ့မလား။ ရခိုင်မှာလို ခြံစည်းရိုးတိုင်နှုတ်ပြီးရောင်းစား..အဲဒီငွေနဲ့ပဲ အဲဒီ အပေါက်က ၀င်တာမျိုးလုပ်လို့
“ရ ။ ကိုယ့် သမိုင်းမှာ ၊ ကိုယ် လုပ်ခဲ့တာတွေကသာ တရားပါတယ်လို့ ၊
ကျနော် ထောက်ခံပေးပါ့မယ် ။ ”
အဘရယ် မဆီမဆိုင် ဂလိုင်ခေါက်နေပြန်ပြီ သူတို့မှာ အဘရဲ့ ဘာဂျာဆိုးတွေ(လူတိုင်းကိုမပြောဘူးနော်၊ဆိုးသူများကိုသာ
ပြောခြင်းဖြစ်၏) ရန်ကတောင်မလွတ်သေး၊ရုန်းကန်နေရရှာတာ လွန်လေပြီးသောကိစ္စတွေ မတွေးနိုင်သေးဘူး။
သူတို့က အဲဒီမှာပဲထားပါအုံးတဲ့ ဒီအချိန်ရခိုင်ပြန်သယ်ရင် ဂျာဂျာတို့မီးရှို့တဲ့အထဲပါနေအုံးမယ်တဲ့။
နေပါအုံး ကိုယ့် သမိုင်းမှာ၊ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေ လို့ပြောရအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေက သေပြီလေ။
ခုနက အဘပဲ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တယ်…
“က ။ သူတို့ဟာ ဘယ် အဖေ ၊ အမေ ရဲ့ ဝမ်းတွင်းမှာ မွေးပါလို့ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိရှာပါဘူး ။
ဂ ။ သူတို့မှာ ဘာ အပြစ်မှ မရှိရှာပါဘူး ။”
အဲသလိုပြောပြီး ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာတွေကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတာလဲ။ ဘယ်သူက
မြန်မာလို့ အဘက တပ်အပ်သိထားလို့ မြန်မာတွေကို ပြောနေရတာလဲ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဆိုရင်
အဘွားက(အဖွားမဟုတ်ပါ)မွန်မကြီးစစ်စစ်။ အစဉ်အဆက်ကလည်း တရုတ်သွေး ၃ကျပ်သား
ကုလားသွေး ၂ကျပ်သား အဲမြန်မာသွေးကတော့ ၇၅ကျပ်သားလောက်ပါတယ်လို့ ပြောဖူးတာပဲ
အတိအကျတော့ မသိပါဘူး။ ဗမာပြည်နေတော့လည်း သွေးများရာ မြန်မာလို့ပဲ
ထည့်လိုက်တာပဲ။ အခုခေတ်မှာ မန္တလေးလို နေရာမျိုးမှာတောင် မြန်မာ စစ်စစ်ဆိုတာ ၈၀%တောင်ရှိ
တော့မည်မထင်။ ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့…သွေးရောတွေ တော်တော်များလာပြီ..ဒါဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တကယ့်ကို multiculture ကိုသွားနေတာ။ Australia မှာ အဘော်ရီဂျင်း က native ဖြစ်လို့ သူ့
culture နဲ့သူ လူမျိုးတစ်မျိူးဖြစ်ပေမဲ့..အဲဒီမှာ မွေးတဲ့ ဘာလူမျိုးမဆိုသွားမေးကြည့် များသောအား
ဖြင့်ကသူတို့ကို ခွဲခြားခွဲခြားပြောတာ မကြိုက်ကြဘူး။ ငါသြစတြေးလျံလို့ပဲ ပြောကြတယ်။
အဘော်ရီးဂျင်းသွားမေးလည်း အဲသလိုပဲပြောမှာပဲ။ ကျွန်တော် တစ်ခုပြောမယ်နော်..
ဗမာတွေဟာ လူမျိုးကြီးဝါဒတဲ့ လူတွေကပြောကြတယ်..တကယ်တန်းကျတော့
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်လူမျိူးနဲ့ကိုယ် လက်ထပ်တာ တရုတ်ကုလားလို ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး
ဘယ်တော့မှာ မပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ လူမျိုးပဲရှိတယ်။ ဗမာမတွေ ဗမာထီးတွေ
နိုင်ငံခြားမှာဆို သိပ်မရွေးဘူး အကုန်လုံးနဲ့ လက်ထပ်နိုင်တယ်။ ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ ယူတာပဲ ဒါအမှန်တကယ်
ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်မြန်မာ အစစ်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သူများတွေ
“အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှတယ်” လုပ်နေတာလည်းအားပေးတယ်။ ဒါလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါ။
အဲသည် အချက်က မကြိုက်ဆုံးပဲ..ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘာသာဝင်အချင်းချင်းဆိုတာ မထားသင့်ပါဘူး။
ဘာ..ဘရားသား..ညာ..ဘရားသားတွေ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ကယ်အနှစ်သာရကို သိရင်..ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ
သဘောပါပဲ။ မြန်မာ နိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းဆိုပြီး ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးပိုက်ဆံ
အထောက်အပံ့ကိုမှ မယူခဲ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဘာသာတွေ ကသာ..ငါတို့ ဘရားသားတွေဆိုပြီး..
လုပ်နေကြတာ။ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ တော်တော်များများ ဟာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖာသိဖာသာနေကြတာများပါတယ်။
အဘက Guest နှင့် ကို ကပ္ပိယ မောင်ကြီးတို့ရဲ့ လိုအပ်နေသော အပြောအဆို ရိုင်းပြခြင်းအကြောင်းတွေကို ထောက်
သွားပြတာ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မမြင်ဘူးတဲ့ သူတို့ကိုပြောရာကနေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ညန်မာတွေ ဖက်ကိုရောက်
သွားလည်းတော့ မသိပါ။ ကျွန်တော် မန့်သွားတဲ့ အထဲမှာ “သိပ်ပြင်းထန်”မှုတွေ မပါဘူးလို့ထင်တာပဲ။
စာနာစိတ်လေးကတော့ ၀င်မိပါတယ် အဘရယ်..ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ၀န်းကျင် ကိုယ့် အနီးအနားမှာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ
ကို အရင်စာနာမိတယ်…အဲဒီတော့ အကုန်လုံး စာနာဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်ပေါ် ခေါ်တင်ထားရမလို ဖြစ်နေပြီ။
တစ်ယောက်ချင်းကို Reply Comment မရေးနိုင်လို့ ၊
စုပေါင်းပြီး ပြန်လိုက်တယ်နော် ။
” မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော် ကို မန်းတလေးမြို့ ကို ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့
ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုသာ စစ်သွားခင်းလိုက်ပါတော့ ”
အဲဒီမှာ နှစ်ပိုင်းရှိတယ် ကိုပေ ရဲ့ ။
မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော် ကို မန်းတလေးမြို့ ကို ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင် ၊
အဲဒီ ဘုရင် ဟာ ရခိုင် ကို စစ်နိုင်ပြီး ရုပ်ပွားတော် ကို ပင့်လာခဲ့တယ် ။
သူ့ ခေတ် သူ့ အခါ အရ ၊ အဲဒီ စစ်နိုင် ဘုရင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ က ပုံမှန်ပဲလို့ပြောရမယ် ။
သို့သော် ၊ ယခု ခေတ် ယခု အခါ ၊
ခေတ် တွေ ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပြောင်းသွားပြီ ။
လက်နက်ကိုင် ၊ အင်အားနှင့် အနိုင်ကျင့်ပြီး ၊ သိမ်းယူတဲ့ ကိစ္စကို ၊
မ ယဉ်ကျေးတဲ့ ကိစ္စ ၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကိစ္စ ၊ မ တရားမှု ( မ တရားမှု ) လို့ ၊
ယခု ခေတ် ၊ လူများစုကြီးက သတ်မှတ်ကြပြီ ။
အဲဒီအခါမှာ ၊ ကိုယ်တွေက ၊
၁ ။ ဗမာလူမျိုးဟာ ယဉ်ကျေးကြောင်း ပြသချင်ရင်တော့ ၊
၂ ။ ဗမာ လူမျိုး နှင့် ရခိုင် လူမျိုးကြား တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ၊
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ကို တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၊
၁ ။ ကိုယ်တွေ ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေ ပြုခဲ့တဲ့ ၊ မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော် ကို ၊
ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ဟာ မတရားခဲ့ကြောင်း အရင် ဝန်ခံရမယ် ။
၂ ။ ကိုယ်တွေ ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေ မတရား ပြုခဲ့မှု အတွက်
ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရခိုင် လူမျိုး တွေကို တောင်းပန် သင့်တယ် ။
၃ ။ မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို ၊
( ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ) ရခိုင်ပြည်ကို ပြန်ပေးသင့်တယ် ။
၄ ။ အတင်းအကျပ် မဖြစ်မနေ ပြန်ပေးရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။
အရင်တုန်းက ငါတို့ ဘိုးဘေးတွေ မှားခဲ့မိကြတယ် ဆိုပြီး ၊
ဝန်ခံ ယုံနှင့်တင် ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ် အပြုခံရမှာပါ ။
( အဘ ကလည်း အဲဒီလောက် ကိုပဲ မျှော်လင့်မိတာပါ )
” ကျုပ်ကတော့.. ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ..
မည်သူမဆို ( မည်သည့်လူသားမဆို ) မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်… ပဲ ”
ကျနော့်ရဲ့ သဘောထားကလည်း သူကြီးနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် ပါပဲ ။
ဒီ Post ထ ရေးဖြစ်ရချင်း အကြောင်းရင်း ကလည်း ၊
” သူဖုန်းစား ” တို့ ၊ ” အိမ်ရှင် ” တို့ ၊ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရင်ထဲမှာ ခံစားမိသွားလို့ပါ ။
အမှန် ပြောရရင် ၊ ကံ ဇတ်ဆရာ က ပြစ်ချလိုက်တဲ့ နေရာမှာ ၊
တစ်ယောက် က ရန်ကုန် မှာမွေးတယ် ။ မိဘ မျိုးရိုး ကိုလိုက်ပြီး အသား ဖြူ တယ် ။
တစ်ယောက် က ဘူးသီးတောင် မှာမွေးတယ် ။ မိဘ မျိုးရိုး ကိုလိုက်ပြီး အသား မဲ တယ် ။
အဲလို ၊ ကိုယ်က ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပဲ ၊ မွေးဖွားလာခဲ့ရတဲ့ လူ ချင်းအတူတူ ကို ၊
သူ ကတော့ ” ဧည့်သည် ” ၊ ငါ ကတော့ ” အိမ်ရှင် ” လုပ်နေကြတဲ့ အယူအဆ ကို ၊
လက် မခံ နိုင်လို့ ၊ ပြောပြနေရတာပါ ။
( လူချင်း အတူတူကို ၊ ပေးတာယူ ၊ ကျွေးတာစား ၊ ထားတဲ့ နေရာမှာနေ ရမယ် ဆိုတာက ပါသေး )
အဘ သဘောကတော့ ၊
ဒီမြေမှာ မွေးတာချင်း အတူတူ ဆိုရင် ၊ အကုန် ” အိမ်ရှင် ” ပဲ ။
ဒီမြေ / ဒီနိုင်ငံ ကို အကုန်လုံး အတူတကွ ပိုင်ဆိုင် ၊ ခံစား ၊ စံစား ကြရမှာပဲ ။
အဲဒီ အခြေခံပေါ်မှာ မတည်ဆောက်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ၊
ဘယ်တော့မှ ၊ တရားမျှတမှု နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု အစစ်အမှန် ကို မရနိုင်ဘူး ။
“၁ ။ ဗမာလူမျိုးဟာ ယဉ်ကျေးကြောင်း ပြသချင်ရင်တော့ ၊
( အဘ ကလည်း အဲဒီလောက် ကိုပဲ မျှော်လင့်မိတာပါ )”
အဘကို ပြောချင်တာကတော့ ဒီကိစ္စတွေ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုပြောတာဟာ…
ရခိုင်နဲ့ မြန်မာ စည်းလုံးမှာကိုမလိုလားလို့ သွေးခွဲနေတဲ့ စကားပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း
အခုအချိန်မှာ အစည်းလုံးဆုံးလို့ပြောရရင် ရခိုင်၊မြန်မာ၊မွန် တို့ပါပဲ။
ချင်းပြည်လို ဆိုတာတွေကတော့ ပြောမနေနဲ့ စည်းလုံးချိန်တောင် မရဘူး ဆင်းရဲရ
တဲ့ကြားထဲ..ဟိုဖက်က ၀င်လာမစဲတသဲသဲတွေ လိုက်ဖမ်းနေရတာနဲ့တင် အလုပ်များ
နေတယ်ပြောရမယ်။ ဘုရားကိစ္စနဲ့ ဂျာဂျာကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်မှုတော့မရှိထင်၏။
လမ်းကြောင်းတွေက အတော်လွဲနေတယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ… စစ်ပွဲတွေ အနိုင်
အရှုံးမှာ နိုင်တဲ့လူက ရှုံးတဲ့လူဆီက မတရားသိမ်းယူ မှု ပြုခဲ့တာရှိမှာပဲ..အရင်လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ
ပြောနေရမယ်ဆိုရင် ယိုးဒယားပါတောင်းပန်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ယိုးဒယားတွေ ကရော ဗမာနိုင်ငံသူလေးတွေ
ဖျက်ဆီးတာ နှိပ်စက်တာတွေ ပြန်တောင်းပန်ရအုံးမယ်။ဒါဆို အဘ
ဗမာနိုင်ငံသားပဲ..အင်္ဂလိပ်တွေ သိမ်းယူသွားတာတွေ ပြန်တောင်းပေးပါလား
ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုပြန်တောင်းပန်ခိုင်းပါလား။ ရခိုင်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်
မူဂျာဟစ်တွေရဲ့ အသတ်ခံခဲ့ရတာဟာ..အင်္ဂလိပ်တွေ လက်နက်ဆင်ပေးခဲ့
လို့လို့ကြားဖူးတယ်။ တကယ်စာနာရင် အဲသလို သိပ်မကြာခင်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေ ကို
အထူးပြုပြောပြီး တောင်းပန်ဖို့ တောင်းဆိုပေးပါလားဟင်။
တကယ်တော့..ရခိုင်တွေဟာ..အဲသလို စိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူး။ ဒါက ကျွန်တော့ အမြင်သက်သက်
သာပြောတာပါ။ သူတို့က အင်္ဂလိပ်ကို အပြစ်တင်ဝေဖန် ပြောသံမကြားဖူးဘူး။
အဘ ကလည်း အရင်အစိုးရ လက်ကျန်လားအောက်မေ့ရတယ်
ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကို
ဘုရား ပြန်ပေးဖို့တွေ…တောင်းပန်ဖို့တွေ ပြောနေတယ်
(သူတို့ကလဲ ပြည်သူတွေငတ်နေချိန် ဘုရားတည်ကြတယ်လေ )
စိတ်ချအဘ တစ်နေ့ ဗမာနိုင်ငံဟာ အဘပြောတဲ့ “အပြည့်အ၀ ဒီမိုကရေစီ”
မရရင်တောင်မှ တိုက်ပွဲတွေရပ်၊အဓိကရုဏ်းတွေရပ်သွားတဲ့ အချိန်ကြရင်
သူတို့ပြန်တောင်းသင့်တယ် ထင်ရင်တောင်းမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ဘယ်
ဟာက အဓိကပြဿနာလဲ ဘယ်ဟာကသာမညလဲ သူတို့ခွဲခြားတတ်
ပါတယ်။ မဟာမြတ်မုနိ ပြန်တောင်းတာ အသာထား ဆူးလေစေတီကို
အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားတာကို မရွှေ့ဖို့ ဘုရင်မကြီးဆီ
လျှောက်တင် တောင်းဆိုခဲ့တာ ဟာ ရခိုင်လူမျိုးကြီးပါ။ အဲဒီအချိန်က
အဲသလောက်အထိ ပေါက်ရောက်ခဲသူတောင် မဟာမုနိ ဘုရားကြီး
ကို ပြန်ရွေ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့သံ မကြားမိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဘုရားကြီးကို
ဘယ်သူကမှ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ သိမ်းသွားတဲ့ လူတွေလို
ရအောင်..အမြဲတမ်း ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဘုရားတစ်ဆူကိုပြန်ရွှေ့ဖို့ဆိုတာဟာလည်း
လွယ်သော အလုပ်မဟုတ်။ လမ်းမှာချွတ်ချော်လို့ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် ပြဿနာ
တစ်ခုထပ်တိုး လာနိုင်တယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ အဘနဲ့ မြန်မာလူမျိုးနဲ့က မုံ့လုံးစက္ကူကပ်ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်နော။
” ဘင်္ဂလီတွေကိုလည်း အကန့်လေးတကန့်ထဲ ထည့်ပီးသာ
ကင်းကင်းနေခိုင်းရင် အဆင်ပြေနိုင်လောက်ပါရဲ့.. ကျလိ.. ကျလိ ”
ကိုရင် စည်သူ ရဲ့ ၊
အရင် ဦးနေဝင်း လက်ထက် ကနေစပြီး ၊ အခု လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အထိ ၊
အစိုးရ အဆက်ဆက် ရဲ့ Policy တွေ အားလုံးကလဲ ၊
ဘင်္ဂါလီတွေကို ဘူးသီးတောင် မေါင်းတော ဆိုတဲ့ အကန့်လေးတကန့်ထဲကို ထည့်ပီး ၊
ကင်းကင်းနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Policy တွေချည်းပဲလေ ။
ပြဿနာကို အမြစ်ပြတ်အောင် မရှင်းလင်းခဲ့ပဲ ၊
ငါ့လက်ထက်မှာ နားအေးနေရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ ဆေးမြီးတို Policy လေ ။
လူကြီးတွေ ထင်ခဲ့တာက ၊ ဒီဖက်ကနေ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်လိုက်ရင် ၊
ဘင်္ဂါလီတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကို ပြေးသွားကြမလားလို့ပေါ့ ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဘင်္ဂါလီတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကို တချို့ ပြေးကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကလည်း ၊ သူ့နိုင်ငံသားမှ မဟုတ်တာ ၊
ဘယ် လက်ခံပါ့မလဲ ။ စာရင်းနှင့် တကွ အကုန် ပြန်ပို့တာပေါ့ ။
အခုလည်း ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက် ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ရောက်နေတဲ့ ၊
ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် ( ၂ သိန်းလောက် ) တွေကို ၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လက်ခံပါ့မယ်လို့ ၊
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ကတိပေးခဲ့ရပြီးပြီ ။
ဘလိုင်းကြီး ၊ သတ်မယ် ဖြတ်မယ် ဆဲဆိုနေတာက လွယ်တာပေါ့ ၊
ဒါပေမယ့် ၊ နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေ နှင့် သံတမာန် ရေးတွေမှာက ၊
ကိုယ် လုပ်ချင်တိုင်း ၊ လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မှ မရတဲ့ ဥစ္စာ ။
ဒီနေရာမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကြားဖြတ် ပြောလိုပါတယ် ။
ဘာပဲ ပြောပြော ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ က ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာမှာ ၊
ဘင်္ဂါလီ တွေကို မြှောက်ထိုး ပင့်ကော် မလုပ်ပဲ ၊
ဘင်္ဂါလီ တွေကို တဖက်လှည့်နှင့် လက်နက် မတပ်ဆင်ပေးပဲ ၊
လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန် ဘာသာရေး စွတ်ဖက်မှု မပါပဲ ရပ်တည်ပေးမှုကိုပါ ။
နို့မို့လို့ကတော့ ၊ ဒို့တိုင်းပြည်ကြီးလည်း ၊ ဗုံးတွေ တစ်ဝုန်းဝုန်း နှင့် ကွဲနေမှာ ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာ ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့လဲ ၊
သူတို့ တတ်နိုင်သလောက် မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဒီအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို ကျေးဇူးတင် အသိအမှတ်ပြု ပါတယ် ။
ထားပါတော့ ၊ အဲဒီ ကန့်သတ် ဖိနှိပ်တဲ့ ၊ ဆေးမြီးတို Policy ဟာ အောင်မြင်မူ မရပဲ ၊
၁ ။ ဘူးသီးတောင် ၊ မေါင်းတော ဒေသ နှစ်ခုလုံး ဘင်္ဂါလီ ၉၀ % နေထိုင်တဲ့ ၊
ဘင်္ဂါလီတွေ ( သီးသန့် နေတဲ့ / ပိုင်တဲ့ ) ဒေသ ဖြစ်သွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်လေ ။
၂ ။ အပိုဆု အနေနှင့် ၊ အရင်က ဒေသဆိုင်ရာ ( ဘင်္ဂါလီ ) လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ကနေ ၊
အခုဆိုရင် ( မိထ္ထီလာ ) ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အဖြစ်ပါ တစ်နိုင်ငံလုံး နီးပါး ပြန့်လာပြီ ။
၃ ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ မျက်နှာလည်း ၊
တော်တော်လေးကို ပျက်နေရပါပြီ ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ၊ အဲဒီလို အကန့်လေးတကန့်ထဲ မှာပိတ်ထားဖို့ အကြံ ၊
ကန့်သတ် ဖိနှိပ်တဲ့ ၊ ဆေးမြီးတို Policy ဟာ အခုအချိန်မှာ ၊ ကျဆုံးသွားပါပြီ ။
( အဲဒီလိုပဲ အဘ ထင်တယ် )
မတတ်နိုင်ဘူး ၊ ကိုယ်တွေက လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ စံနစ် ကို လိုချင်တယ် ၊
လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ စံနစ် ကို သွားချင်တယ် ဆိုလို့ ရှိရင်တော့ ၊
ဒီလို အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကိုတော့ ဖြတ်ရမှာပဲ ။
ဒီလို ၊ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာတွေကို မ ဖြတ်ချင်ရင်တော့ ၊
လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ စံနစ် ကို မ သွားမှပဲ ရမယ် ။
( အခု အချိန်မှီသေးတယ် ၊ စစ် အစိုးရ ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါလား )
အဲဒါကြောင့် ၊ အရင် Post မှာ အဘ ရေးခဲ့တာပေါ့ ။
” ကျနော်တို့ကော ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကို တကယ် လိုချင်ကြသလားဟင် ။
ဟဲ ဟဲ ၊ အဘ သိပါတယ် ၊ မလိုချင်ကြပါဘူး ။
ဒီမိုကရေစီ ထဲက ကိုယ်သာမယ့် အချက်လေးတွေကိုပဲ ကွက်ယူပြီး ၊
ကိုယ်နာမယ့် အချက်လေးတွေကိုတော့ဖြင့် မလိုချင်ဘူး ၊ မဟုတ်လား ။
လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုရင်လဲ ၊ ကိုယ်သာ အပြည့်လိုချင်ပြီး ၊
သူများ ကိုတော့ အပြည့် မပေးချင်ဘူး ၊ မဟုတ်လား ။
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ၊ ရမှာပါ ။ ရအုံးမှာပါ ”
အစွန်းရောက် ဂျပန်တွေ ..စစ်အစိုးရ နဲ့များ သွားနေလားမသိဘူး
ဗလီ တွေ မတွေ့မိပါဘူး..
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက လူ့အခွင့်အရေးဆရာကြီးတွေလည်း အစ္စလာမ်လည်လှီးလို့သေပဟ..လုပ်ကျပါဦး..
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ ရန်ကဘယ်လိုကာကွယ်ရမလည်းဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးလည်းတင်ပေးပါဦးနော်။ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ထောင်းချင်ရင်လည်း နူကလီးယားဗုံးသာကျဲချလိုက်ပါ။
” ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ထောင်းချင်ရင်လည်း နူကလီးယားဗုံးသာကျဲချလိုက်ပါ ”
ကို chityimhtoo ရဲ့ ။
အဲလို ဖြစ်မစိုးလို့ ၊ အဘ ဒီ ကိစ္စတွေ ဘာမှ မရေးပဲ ၊
အသာ နှုတ်ဆိတ်နေတာ ၊ အတော်ကြာရောပေါ့ ။
အခုဟာက ၊ ဒီထဲမှာ ဘင်္ဂါလီ ရွာသူား မရှိလေတော့ ကာ ၊
တဖြေးဖြေး နှင့် ၊ အရေးအသားတွေ အစွန်းရောက်လာသလားလို့ ။
အခု အဘ ပြောခဲ့တဲ့ အထဲမှာလည်း ၊
ဗမာ မ ကောင်းကြောင်း ဆိုပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒီလိုပဲ မွတ်ဆလင် ကုလား ကောင်းကြောင်းလဲ မညွှန်းခဲ့ပါဘူး ။
ဘင်္ဂါလီ ဟာလည်း ၊ ဒီ မြန်မာ့မြေ တစ်မြေထဲမှာပဲ အတူတကွ မွေးလာတဲ့ ၊
လူ အချင်းချင်းသာလျှင် ဖြစ်တာမို့ ၊ လူသား အချင်းချင်း စာနာမှု ပေးဖို့ပဲ ပြောတာပါ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ အဘ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် အသာပုတ်လိုက်တာပဲ ရှိပါသေးတယ် ။
ထောင်းတဲ့ အဆင့် မရှိသေးပါဘူး ။
ထောင်းချင်မှတော့ ဒီ့ထက်ဆိုးတာတွေ အများကြီး ရှိသပေါ့ ။
နမူနာလေး ဖါတ်ချင်သပ ဆိုရင် ။
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၆ ) ( “ဝ” ဟာ တိုင်းရင်းသားလား ??? )
—http://myanmargazette.net/164915/creative-writing— ဆိုတဲ့ Post မှာ
သူကြီး Kai ပေးသွားတဲ့ Comment လေးကို ဖတ်စေ / တွေးစေချင်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ အိမ်ရှင် တွေ ၊ ဧည့်သည် တွေ ဆိုတာ ကို နဲနဲ သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဘ ကတော့ ၊ ဒီ့ထက် မနာစေလိုတဲ့အတွက် ၊ ထပ် မပြောချင်တော့ပါဘူး ။
” မြန်မာဆိုတာ.. မြန်မာ့မြေကို နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့..ဧည့်သည်တွေပေါ့နော..
သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့.. မွန်ခမာ ။
ပြီးတော့မှ.. တိဘက်တိုဘားမန်း.. ။
ပြီးမှ.. တိုင်(ရှမ်း)လို့.. အစဉ်အတိုင်းချပြကြတယ်..။
ဘာသာတရားမှာလည်း.. မြန်မာပြည်ထဲခြေချတာ.. ဟိန္ဒူဘာသာကအရင်လို့..
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၁၀၀၀ လောက်ကမှ..
အရှင်အရဟံနဲ့အတူုတူရောက်တယ်(ယူဆရတဲ့) ဧည့်ဘာသာလို့ ယူဆမိတယ် ”
သူကြီး Kai ရဲ့ အလုံး ကို ယူသုံးသလိုတော့ ဖြစ်နေပြီ ။
ဆောဒီးနော် ၊ သူကြီး ။
” အစွန်းရောက် ဂျပန်တွေ ..
စစ်အစိုးရ နဲ့များ သွားနေလားမသိဘူး
ဗလီ တွေ မတွေ့မိပါဘူး ”
ကထူးဆန်း ရဲ့ ။
ဂျပန်တွေက ကံကောင်းလေတော့ ၊ Civilization Fault Line လို့ ဆိုရမယ့် ၊
ဗုဒ္ဓ – မွတ်ဆလင် ကပ်ရက် ထိတွေ့နေတဲ့ နယ်မြေပေါ်မှာ ရောက်မနေဘူးလေ ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်နေတာက ၊ အမှန်က Clash of Civilization ပါပဲ ။
နောက်တစ်ခုက ၊ ဂျပန်တွေရဲ့ ဘာသာရေး ကိုယ်ခံအားလည်း တော်တော် ကောင်းပုံ ရတယ် ။
ကျနော်တို့ ထေရဝါဒ တွေက ၊ မဟာယာန တွေကို အထင်မသေးသင့်ဘူး ဆိုတာ ပြနေသလိုပဲ ။
အဲလို ၊ ဂျပန်တွေလို ဘာသာရေး ကိုယ်ခံအား ကောင်းအောင် လုပ်တာတွေကို အားပေးပါတယ် ။
ကျနော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ ၊ ၇၈၆ ဆိုင် မဝယ်နှင့် အထိကို နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ် လို့ ။
ကျနော် လက်မခံ ၊ အားမပေးနိုင်တာက ၊ အိမ်ဖျက် ဆိုင်ဖျက် လူသတ် အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပါ ။
တကယ်တော့ ဂျပန်ဒေ ဘာသာရေး ကိုယ်ခံအား မကောင်းလွန်းလို့
မူစလင် လက်မှိုင်ချရဒါဘာ အဘရယ်..
ဂလောက် သေရည်သောက် သားစားကျူးတဲ့လူမျိုး…
ဥပုသ်လ တလလုံး တံတွေးမမျိုရဘု တို့ဘာတို့…
ပီးဒေါ့လေ… ဟိုကိစ္စကလည်း သရမ်းသေးဒါ…
မဂ္ဂဇင်းတစောင်မာလေ.. အရွယ်ရောက် ဆင်ဂယ် ဂငယ်မဒေကို စစ်တမ်းလုပ်ထားတာချိဒယ်
တလကို လိင်ဘယ်၂ကြိမ်ဆက်ဆံသတုန်းနဲ့ ဘယ်လိုလူဒေနဲ့ ဆက်ဆံသတုန်းဆိုတာ
အကြိမ်ကတော့ထားပါတော့ ပါတနာကို ဖြေတာမှာ..
အထက်လူကြီး ၊ ရာထူးတူ ၊ သူငယ်ချင်း ။ရဲဇား ၊ လစ်ဗင်းတူဂဲသား ၊ အသိ(အိမ်နီးနားချင်း) အံမယ်..
အဖြေထဲ Other ဆိုတဲ့ ကတ်တီကိုရီ တောင်ပါသေးသဗျားးး။
စာပေကျတော့လည်း ဒင်းတို့ ဘူးသီးငါးပေါင်းကြော်တောင် မနည်းကုန်းရုန်းဖတ်နေကြရတာ
ဘယ်သူမှ အာရေဗီ ထပ်ပီး မဖတ်ချင်ဂျ…။
အဲ့လိုလေးဒွေ ကြောင့်လည်း အများယီးပါပါတယ်ခည…။ ဂျပန်ဒေ ဗလီထဲဝင်မှာ သူတို့ကတောင်
ပြန်ပီး စိုးတယ် စိုးမိဒယ် စိုးရိမ်မိတော့တယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားပါဗျားးး။
” ဂျပန်ဒေ ဗလီထဲဝင်မှာ သူတို့ကတောင် ပြန်ပီး
စိုးတယ် စိုးမိဒယ် စိုးရိမ်မိတော့တယ် ဆိုတဲ့
ဂျပန်ဒေ မြှောက်ပေးလို့ အဘလဲ ငါး အစိမ်းစားတတ်သွားတာလေ ။
သူတို့ဆီက အရာရှိတွေက ကုမ္ပဏီ စရိတ်နှင့်
ညနေတိုင်း သောက်ပွဲလုပ်ကြတယ် ။
မရှိရင်လည်း ၊ ရှိအောင် အတင်း လုပ်တတ်ကြတယ် ။
ညနေတိုင်း ၊ စားပွဲ သောက်ပွဲ ပြီးမှ ၊ အိမ်ပြန်ကြတယ် ။
အဲ.. မြန်မာတွေက.. ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း.. အခန်းလေးငှား..ခိုးလုပ်ထားခဲ့ရတာပါပဲ..။
မှတ်မိသလောက်.. အီရတ်-အီရန်စစ်နောက်ပိုင်း.. အီရန်လူမျိုး(ပါရှန်း)တွေအများကြီး.. ဂျပန်ကရဖျူဂျီအဖြစ်(ထင်တာပဲ) လက်ခံတယ်..
တော်တော်များများ.. ဂျပန်မတွေနဲ့ရပြီး.. ဓါတ်ပျက်ကုန်တာပဲ..။
ဆာမူရိုင်းနဲ့..ဇမ်စိတ်ဓါတ်သာ.. လာတဲ့သူတွေထဲ.. ၀င်သွားမယ်..
ထူးဆန်းတာပြောရရင်.. တိုကျိုမြို့တော်မှာ.. ချိုင်းနားတောင်းလည်း.. မရှိကြောင်း..
ဆိုတော့ တရားဝင် လုပ်ခွင့် မပေး ဘောင်ကန့်ထားလို့ ပေါ့ နော် နော် ..
ဆိုတော့ .. တရားဝင် ထပ်ဆောက်ခွင့် မရအောင် လုပ်ကြပါ ။
လွှတ်တော် မှာ ဥပဒေ သက်ဝင်အောင် တောင်းဆိုကြပါ ။
ဆိုတော့ မြန်မာတွေ ကိုယ်ခံ ခိုင်အောင် လုပ်ဖို့စဉ်းစားကြပါ ..
အိမ်ဖျက် ဆိုင်ဖျက် လူသတ်တာ အားမပေးပေမဲ့ ထပ် မပွားအောင် တော့ လုပ်ဖို့ လိုနေပြီ အချိန်တောင် အတော် နောက်ကျသွားပြီဆိုတာ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ ( cr: ကိုပေ)
ချိုင်းနားတောင်း ရှိမလား သူကြီး ရဲ့။
သူတို့က တရုတ်လူမျိုး ဆို အသေမုန်းတယ်လို့ ကြားဖူးတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာလဲ Made in China တွေနဲ့တော့ မကင်းပါဘူး။
ကျုပ်အမေ(ဒေါ်ဝီကီ) ခေါ်လာရန်တွေ့ခိုင်းရမား ပျောဘာာာ
မရှိဘု မငြင်းပါဘု အံ့သြစယာကောင်းလောက်အောင် နည်းနေတာပြောပါတယ်.
ဒီနေရာမှာ ဂျပန်ကာလချာနဲ့ ဇရိုက်ကို သိသလောက် နည်းနည်းတူးပါ့မယ်
အနှီ ဂျပုတွေက individualism ကို ရေလည် ကိုးကွယ်တာကလား
အလုပ် ဆိုတာ ဘဝ ဖြစ်ပီး အလုပ်+ဘဝ ဟာ meaning of da life ပါတဲ့
သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု (ကိုယ်ပိုင်ဟန်) ကို အလွန်ဇောင်းပေးတဲ့ လူမျိုးခည.
ကမ္ဘာမှာ Tokio street fashion ကနာမည်ကြီးတယ် ဘာကြောင့်တုန်း ဆိုရင်
Unique မဖြစ်ရင် fashion မကျဘူး တဲ့. ဆိုလိုသည်မှာ ဂျင်းပင်န်တွေ တီရှပ်တွေ ကို
ချာတိတ်တွေ ဒီတိုင်း စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ဘယ်သူမှ မဝတ်ဘူး.
Refined shop ကဝယ်ဝတ်တယ် refined ဆိုတာ အဟောင်းကိုပြန်သထားတာ မဟုတ်
အသစ်ကိုပဲ ဆီးကွန့်စ်ထိုး စတစ်ကာကပ် နဲ့ ပြုပြင်ထားတာ လက်နဲ့ မော်ဒီဖိုင်းထားတာ
ကိုဆိုလိုတာ သည်တော့ တိုကီယိုလူငယ်တွေ ခါးပေါ်မှာ တယောက်ဝတ်ထားတာနဲ့
ကျန်တယောက်ဝတ်ထားတာ ထပ်တူညီ မရှိ ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်တယ်.
ပြန်ကောက်ရရင် အနှီ တကိုယ်တော် နေထိုင်ဝတ်ဆင်ကျင့်သုံး တဲ့ ဉ်ကျေးမှုက
အစ္စလာမ် ယဉ်ကျေးမှုတွေကို မကြိုဆိုနိုင်ဘူးပေါ့.
တိုင်းပြည်အနေနဲ့ကြည့်အုံး အစကတည်းကမှ သူတို့ကိုသူတို့ တီလုပ်နဲ့ ကိုရီးယန်းတွေနဲ့မတူအောင် သီးခြားဖြစ်တည်မှု
ဖြစ်လာအောင် လုပ်ထားတဲ့တိုင်းပြည် ဆိုတော့ အစ္စလာမ်ဆြာတို့ ဂွကျတာပါပဲ.
နောက်တချက် nationalism သိတဲ့အတိုင်း နေမျိုးနွယ် နာဇီ စိတ်ဒတ်လက်ကျန်ပေါ့ဗျာ.
သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကျွန်းနိုင်ငံ 島国 ဆိုတာ လက်ခံထားတယ်
ကမ္ဘာကြီး ကတဖက် သူတို့ကတဖက်လိုမျိုး ငယ်ကတည်းက တွေးထား မွေးထားတယ်
ကမ္ဘာနဲ့ မဆက်ဆံရရင်တောင် ငတို့ ရှင်သန်နေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဒတ်မျိုး မွေးတယ်
အဲ့သည်မှာ ကိုယ့် ရှေးရိုးမဟုတ်ရင် ယူမသုံးဘူးဆိုတဲ့ ကာလချာ ကွန်ဇာဗေးတစ် ပေါ့ဗျာ
အမြစ်တွယ်တာပါပဲ. ခုတောင် အာဘေးတို့ ကွန်ဇာဗေးတစ် ပါတီ ကကိုင်နေတာနော.
သည်တော့ အစ္စလမ်မစ် ကာလချာဆိုတာ သူတို့အတွက် aliens တွေလိုပဲခည.
အပေါ်မှာ ကျနော် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမန့်သွားသလို အစား အသောက်နဲ့ လိင်ကိစ္စ
ခုံမင်တာကလည်း တပိုင်းပေါ့ဗျာ ဝင်ရခက်တယ် မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ
အဲ့နောက်ဆုံးတပိုင်းကတော့ ကျနော်အရင်ကလည်း ပြောဖူးတယ်ခည
လူမျိုးလား မျိုးရိုးလား ဆိုတဲ့ကိစ္စ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာက မျိုးရိုးနာမည်မရှိ
လူမျိုးတွေသာ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၃၅ ခုတဲ့ (ခွက်ဒစ်တူ ပါပါယီး) မစည်းလုံးကြ
သူတလူငါတမင်းကြ သူကယုတ်တယ် ငါက မြတ်တယ်လုပ်ကြ
ဂျပုဒေကတော့ သူတို့အားလုံးက နိပွန်းဂျင်းဆိုတဲ့ လူမျိုးကြီး တမ်ျုးတည်းပါတဲ့ခည
သန်း၁၂၀ ကျော်က မျိုးရိုးနာမည်အလိုက်တော့ ကွာမပေါ့လေ သို့သော် လူမျိုးဆိုတာယီးက
တံတိုင်းမကန့်လေတော့ အထက်ကပြောတဲ့ အနှီ တကိုယ်တော်ဆြာ တွေ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ကြတဲ့အခါ
အလွန်စည်းလုံးကြတာရယ် ငါတို့လူမျိုးဟ ဆိုပြီး. ကြိုက်တဲ့ ဂျပန်သံရုံးစိုက်တဲ့ တိုင်းပြည်တိုင်းကိုကြည့်
ဂျပန်အသင်းရှိတယ် ငါက ကောင်စစ်ဝန်ကွ နင်ကဖွတ်ကျားစီးပွားရေးသမားပေါက်စဟ ဆိုပြီး
မရှိကြဘု စည်းလုံးကြတယ် ကူညီထောက်ပံ့ကြတယ် တဖက်ကလည်းပြန်လည်လေးစားသမှုနဲ့
အရိုအသေပေးအသိမှတ်ပြုပြန်တယ် ပါဆင်နယ်လိုက်ဖ်မှာသာ အင်ဒဗစ်ဂျူဝယ်လစ်ဇင်မ်နေမယ်
ကိုယ်နဲ့ နိုင်ငံသားတူ လူမျိုးတူအပေါ်မှာတော့ ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်မယ်.
ကဲပြော တိုင်းတပါးကာလချာ ဘာသာ ခြေကုပ်မယူနိုင်တာ မဆန်းတော့
ချိုင်းနားတောင်းမချိဘု မပြောဘာနဲ့ သဂျီးရယ် အိခဲဘုကုရို နဲ့
အုအဲနို-အမဲယော်ကိုးမြေအောက်က ဈေး ကိုလာကျိဇီချင်ဘာဒယ်.
နောက်ပီး ပါချင်းကိုးတေကို ပုံပြင်ထဲက ယာကူဇာတေပိုင်နေသေးသလား
ဂန်နာလာရစ်ဇ် ကမျက်ပေါက်ကျဉ်းဒေပိုင်နေပီလားလည်း တချက်လေးစောင်းငဲ့ကျိပါအူး
ဂငယ်ကို နောက်ဆုံး စိန သိမ်းမာပါ အစ္စလာမ်မဟုတ်
ခုတောင်ဘူတာကြီးကြီး ရောက်တိုင်း စီလုပ်လို အနောင့်စ်လုပ်ပေးနေရဘာဘီ
ဂျပန်မှာ၊ စကာင်္ပူမှာ လာဘ်စားတဲ့ ဝန်ထမ်း မရှိသလောက် ရှားတယ်။
ဒီတော့ မဟုတ်တာ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ က အဲဒီကို သွားဖို့ ဘယ်လို လုပ်စိတ်ကူး ရှိပါ့မလဲ။
စဉ်းစားကြပါ။မြန်မာပြည်က တာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲ များရေ။
ယူအက်စ်၊ ဥရောပဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ အဖက်ဖက်က အပေါ်စီးမှာ ရှိထားတာ။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုဖြစ်ပြီလား…. နောက်ပြီးတော့ သူတို့က တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသားကို စီးပွားရေးအရ လိုအပ်လို့ လက်ခံထားရင်း ကြာလာတော့ ဥပဒေအရ စကားပြောလာတာ၊ မြန်မာပြည်မှာက ကိုယ့်ဆီအတင်း အဝင်လာခံရတာ… သဘာဝခြင်း မတူဘူး။ ဘင်္ဂါလီအရေး ပေါ့သေးသေး မတွက်နဲ့…။ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ မြန်မာတွေ သိန်းသန်းချီရှိပေမဲ့ ခေါင်းမော်ကြည့်ခွင့် ရလို့လား။ မြန်မာပြည်မှာ ကုလားတွေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့အခါ တန်ပြန်ဖျက်ဆီးမှု ကြီးကြီးမားမား လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒါတောင် ငါးသိန်းလောက်ရှိတဲ့ င်္ဘဂါလီတွေ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ ပိတ်ဆို့ထားလို့နော်…။ လဝကအနေနဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောက မဟုတ်တဲ့ တရားဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၊ တရားမဝင် နေထိုင်သူစာရင်း အတိအကျ စိစစ်ရမယ်။ အရင်လို့ လျှို့ဝှက်စာရင်းနဲ့တင် မပြီးဘူး။ ဝအရေး၊ တရားမဝင် တရုတ်လူမျိုးအရေးလည်း ထိုနည်းတူစွာပဲ…။
” ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းလေး အကျယ်ဆွေနွေးစေချင်ပါတယ်
ကိုယ့်လူတွေပဲထောင်းဖို့ စဉ်းစားမယ့်အစား လက်တွေ့  ပြသာနာ ကိုရှင်းမယ့်နည်းလေးပေါ့ ”
” ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ ရန်ကဘယ်လိုကာကွယ်ရမလည်း
ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးလည်းတင်ပေးပါဦးနော် ”
အဘ ရေးပါ့မယ် ။
Post ဖြစ်မလား ၊ Comment ဖြစ်မလား ။
အခု လောလောဆယ်တော့ စာရှည်ကြီးတွေ ပြန် ရိုက်ရတာ ၊
မျက်စိ အလွန် ညောင်းလှသဖြင့် ၊ ခဏ နားပါရစေ ။
ရေငံပိုင် ဦးဖော ပို့ စ်ထဲ ဝင်ဖတ်ရင်း ဆွေးနွေးရင်း
ပို့စ်က ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ …
ကွန်းမင့်တွေတော့ ကောင်းလှသဗျာ ….. ။
ရှေ့ပို့စ်လည်း ဖတ်ပီးသွားပါပီ … တဆိတ်လောက်တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ …
အိုသူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ ..
ဒါပေသိ .. ဆွဲရင်း ဆွဲရင်း
အပြင်မှာ တကယ်ထွက်ဆွဲကျရင်တော့ ခင်ဗျားတို့က ကျည်ကွယ် မျက်ကွယ်မှာ ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားတို့ရော ကျန်တဲ့ ဖတ်တဲ့သူတွေပါ …..
သတိထားဂျဇေလိုပါတယ် … နင့်မေကလွှား
ကိုအဘဖော ရဲ့ ရုရှားစကား ပွဲစည်နေတုန်း
ဘော့စတွန် မှာ ဗုံးခွဲသူ နှစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်ပြီးပြီ။
ရုရှားက ညီအစ်ကို ပါတဲ့။
အမေရိကန်လို နိုင်ငံကတော့ သူ့နိုင်ငံထဲမှာ မတရားလာလုပ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆိုရအောင်ရှာပြီး ဗျင်းတာဘဲ။
ဒီလို အိုင်ခေတ်ကြီးမှာ သတင်းစတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို တွေ နဲ့ သဲလွန်စ ရှာနိုင်ပြီဘဲ။
သူ့ဆီက ပြည်သူ/သား တွေကလဲ ရဲ တွေကို တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းထဲ ဝိုင်းကူကြတာမြင်ရတာ။
ဥပဒေကောင်းကြီးစိုးတဲ့ နေရာမှာတော့ ဘယ်သူမှားတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေအရ သွားမှာအသေအချာဘဲ။
ဥပဒေဘက်တော်သားတွေ (အများစု) ဆိုတာကလဲ မှန်တဲ့ဘက်ကဘဲ နေမှာမို့ မဟုတ်တာကို လာဘ်ထိုးလို့ တော်ရုံ ရမှာမဟုတ်။
ဒီတော့ သူတို့ ဆီက လူတွေ မှာ ကိုယ်မှန်လို့ကတော့ ကျီးလန့်စာစား နေစရာမလို။
အဲဒီလို ပြည်သူတွေ ရှေ့က မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်ပေး ကာကွယ်ပေး နေတဲ့ အစိုးရ အာဏာပိုင် တွေကို တွေ့တိုင်း ကိုယ့်လူတွေ အတွက် စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ပိုက်ဆံရှိလို့ကတော့ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်။
လောလောဆယ် ပိုက်ဆံရှိနေတာတွေကလဲ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေ နဲ့ ပါဝါရှိ အာဏာရှင်များ။
ဒီတော့ သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရေ ဖြစ်နေရမှတော့ အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ ကာကွယ် နေရတဲ့ပြည်သူတွေ ကို အပြစ်တင်ဖို့ ခက်တယ်။
ဒီလို လူတွေကို သွားပြီး ကိုအဘဖော ရဲ့ ပထမ Post ထဲက မေးခွန်း ကို မမေးသင့်သေးဘူး။
ပြည်သူတွေကို စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ် နေတဲ့ ပါဝါ အာဏာရှိ လူကြီး လူကောင်းတွေ နဲ့ ဥပဒေဘက်တော်သား ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးရမဲ့ သူတွေ ကိုအရင်မေး ရမှာ။
“ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကို တကယ် လိုချင်ကြသလား” ဆိုတာကို။
ပြည်သူတွေ အတွက် ကတော့ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကို တကယ် လိုချင်တာ မလိုချင်တာ အသာထား
မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဥပဒေတွေက ကိုယ့်မူရင်းပြည်သူ အများစု ကို အပြည့်အဝ ကာကွယ် မပေးထားတာ အားလုံးအသိပါ။
သေချာတာကတော့ ဘယ်သူပိုက်ဆံရှိလဲ။ ပါဝါရှိလဲ။ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီတော့ လူအများစု အတွက် မတရားမှု တွေက နေ အမှန်အကန် အကာအကွယ်ပေးတာတွေ ကို အရင်ဆုံး လုပ်ပြပါစေဦး။
အဲဒါတွေ ကို သက်သေပြပြီးတော့မှ “ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကို တကယ် လိုချင်ကြသလား” ဆိုတာကို ပြည်သူတွေကို မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ခေါင်မိုး အပေါက်ကြီး နဲ့ ကတော့ ဘယ်လိုမှ ရွှေပြည်အေး တရား ဟောလို့ရမယ် မထင်ပါ ကိုအဘဖော ရေ။
တကယ်ပြောရရင် ခုလို တကူးတက အချိန်ပေးပြီး ပြန်ကြားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနှင့်.. မန်းဂေဇက်ရဲ့ နာမည်ရ စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက်မှ အထူးတဖန် ပြန်လည်ရှင်းပြချက်ကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် အထူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ခင်ဗျား..။
လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေ ဆိုသလို.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ အယူအဆနဲ့ အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ အယူအဆဟာ များစွာ ခြားနားတတ်ကြပါတယ်။
သို့သော်.. မြန်မာပြည်၏ ကိုယ်စားပြုဟု ပြောနိုင်တဲ့ သုံးရောင်ခြယ် အလံကြီးထဲက ရှိပြီးသား ကြယ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာ လခြမ်းပဲ့ကြီး ကပ်ပါလာမှာကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မလိုလားကြတာ အမှန်ပါ။ အစ္စလာမ် ပွားများနှုန်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြဿနာ၊ မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော
နိုင်ငံတို့၏ အနာဂတ်.. စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် လွယ်လင့်တကူ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စကို တော့ ပြောစရာ မလိုအောင် လူတိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ စစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့ အတောင့်တဆုံး အိပ်မက်ပေါ့။ လူသားအခွင့်အရေး ကို မကန့်ကွက်ပါဘူး။ သို့သော် ကာလ၊ဒေသ၊ပရောဂ.. စတာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော့ လိုပါအုံးမယ်။–
ဆက်ပြီးကြည့်ရင် အဲဒီ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးဟာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှု မရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ဒီဘာသာဝင်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို မကြိုက်ကြဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို မကြိုက်ကြဘဲနဲ့ ကြိုက်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေကို “ကဲ.. မင်းတို့တော့ ဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်… ဥပဒေအတိုင်း မင်းတို့ ကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်တွေ၊ အတားအဆီးမဲ့ သာသနာပြုခွင့်တွေ၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး .. လွတ်လပ်စွာ တရားဟော စည်းရုံး သိမ်းသွင်းခွင့်တွေ ပေးလိုက်ပြီ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး အလိုရှိရာ လုပ်ကြတော့.. ” လို့ ခွင့်ပေးကြည့်ပါလား။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ။ ထင်တိုင်းပြောရရင်တော့… လွှတ်တော်ခေါ်ရင် မွတ်ဆလင် ကုလားအမတ် အနည်းဆုံးတစ်ဝက်လောက် ပါလာတာကို ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ မသေခင် မြင်သွားရမှာပေါ့။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ဘယ်က အုံးမလဲ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ မှာ ပဲပင်ပေါက်စာတို့၊ ကြားနေကြ ဘုရားသံ တရားသံနဲ့ ဝေေ၀စည် နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ .. တစ်ရက် ငါးခါ သံသေး သံကြောင်နဲ့ စင်ပေါ်က ဖင်ကုန်းအော်ဟစ်နေတဲ့ အသံတွေ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါ .. မင်္ဂလာပါ ဆိုတာပျောက်ပြီး .. ဆလာမ်ဝါရေကွမ်း ဆိုတာပါ ပြောရဲလာအောင် ကျင့်ရအုံးတော့မယ်။ စစ်အစိုးရ လုပ်ခဲ့လို့ ခွက်ခွက်လန်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ .. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးရဲ့ လုံခြုံရေး အရ အာရုံစိုက်လာရမယ့် အခြေအနေမျိုးကိုမုချ မသွေ ရောက်လာရအုံးမယ်။
ကိုယ်က ကောင်းတာလုပ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စဟာ ကိုယ့်ကို သေတွင်းပို့လိုက်သလိုမျိုးလည်း ဖြစ်သွားမှာ စိုးရတယ်။ ဥပမာ ဆိုရင်.. ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာ ဘာသာခြားတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ပင်း ကိုလှီးဖို့နေနေသာသာ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ရဲ့ အသက်ကိုတောင် အကြောင်းမဲ့ မသတ်ရက်ပေမယ့် … မူဆလင်တို့ရဲ့ ဆရာကြီး မော်လ၀ီ ကတော့ ဘာသာခြားတစ်ယောက်ကို ကိုရမ်ကျမ်းအရ လည်လှီး သတ်ဖို့ရန် သိပ်ခက်ခဲမယ့် ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါ။
အချုပ် ပြောရရင်တော့.. ရှိပြီးသား ၄င်း ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ပိတ်ဖို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. သို့သော် ..မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ အစ္စလာမ် ဗိုင်းရပ်ပိုး ပိုပြီး မပြန့်ပွားလာစေဖို့ကိုတော့.. ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့် ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးကြသူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြပါတယ်။
အထက်က ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ရတာက အားလည်းရ၊ ဗဟုသုတလည်းရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဘာမှ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ဟာကို ၊ ကိုယ့်အယူအဆကို လျှောက်ရေးတာပါ။ ( အချိန်လည်း များများမရပါ။ ရတုန်းလေးခဏ ဖတ်ကြည့်တာပါ။ )အယူအဆခြင်း တိုက်ဆိုင်မှု မရှိခဲ့ရင်တော့ … ဘယ်လိုပြောရမလဲ… လွန်တာရှိ ၀န္တာမိ ပါ ခင်ဗျား..။။။။
” မြန်မာဆိုတာ.. မြန်မာ့မြေကို နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့..ဧည့်သည်တွေပေါ့နော..
အရှင်အရဟံနဲ့အတူုတူရောက်တယ်(ယူဆရတဲ့) ဧည့်ဘာသာလို့ ယူဆမိတယ် ”
အခြေအနေကရှင်းရှင်းလေးပဲ အဘရယ်…သဂျီးပြောတဲ့ပုံမျိုးဆို တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးကို ဗြဟ္မာကြီး၎ဦး
က စတင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့သာအိမ်ရှင်တွေလို့ပဲ ပြောရမလား..ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ အတွက်
သူသာလျှင် အိမ်ရှင်လို့ပဲ ပြောရမလား။ ဒါဝင်က လူဆိုတာမျောက်က ဆင်းသက်လာတယ် ပြောတဲ့အတွက်
မျောက်တွေသာလျှင် အစောဆုံးသောအိမ်ရှင်လား?(အခုတော့ အိမ်ရှင်တွေ တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲရောက်နေပေါ့နော )
ဒါမှမဟုတ် သိပ္ပံပညာတွေ့ရှိချက်အရ ဒိုင်နိုင်ဆောကြီးတွေကပဲ အိမ်ရှင်တွေလား? ဆိုပြီး လျှောက်တွေးနေရင်တော့
ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်တစ်ထောင် ရှင်အရဟံနဲ့ ရောက်တယ် အခုထက်ထိ အထင်အရှား
တည်တံ့နေတယ်။ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော..ကောင်းတာဆိုးတာ အပထား…ဗမာနိုင်ငံ တည်တံ့နေတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြည်နယ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တော့ အခုလောလောဆယ် သူတို့ပြည်နယ် အဖြစ်တည်ရှိနေကြ
တယ်။တစ်ချိန်တုံးကတော့ ဘယ်သူတွေအရင်ရောက်လို့ ဘာနာမည်တွေနဲ့ရှိခဲ့လည်းတော့မသိ။ အခုလောလောဆယ်တော့
ဒါတွေဟာ အိမ်ရှင်အဖြစ်ပါပဲ။ အိမ်ရှင်ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ဗျာ.. ဥပမာ..လူတစ်ယောက်က တိုက်ခန်းအသစ်တစ်ခုဝယ်ပြီးနေတယ်။
အဲ တစ်နှစ်လောက်နေတော့ စီးပွားရေး အစဉ်ပြေတော့ တစ်ခြားပိုကောင်းတဲ့ နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ နေချင်တော့
လက်ရှိတိုက်ကိုရောင်းတယ်။ အဘက ၀ယ်တယ်ဆိုပါတော့…အဘကအိမ်ရှင်ဖြစ်ပြီ ပေါ့ဗျာ…ပထမ လူကပြန်လာပြီး
ဟေ့..ဒါငါနေခဲ့တာ…ငါ့အိမ်လို့ပြောလို့ မရတော့ဘူးပေါ့နော်…တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီလိုဘဲ နယ်နမိတ်တွေ သတ်မှတ်
ပြီး နေနေကြတာပဲ။ သြစတြေးလျတိုက်ကြီးက အကျယ်ကြီးပါ လူနေလို့ရတဲ့ အပိုင်းက ဗမာပြည်ထက် အများကြီးပိုကြီးတယ်
Queensland တစ်ခုထဲကတင် မြန်မာပြည်ထက်ကြီးတယ်ကြားဘူးတယ်။ ပြီးတော့ သြစတြေးလျဆိုပြီးဖြစ်လာတာက
ရှင်အရဟံ အနော်ရထာ ခေတ်လောက်တောင် သက်တမ်းမရင့်သေးဘူး။ သူတို့လည်း တစ်ချိန်က လှေတွေနဲ့ လာခဲ့ကြတာပဲ…
အခု boat people ဆိုတာတွေလည်း လှေတွေနဲ့ ကူးလာကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့…boat people ပြဿနာဟာ သူတို့အတွက်
အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့က လက်ခံခြင်တယ်..တစ်ချို့က လက်မခံခြင်ဘူး…ဒီလူတွေ ထပ်မလာနိုင်ဖို့..နည်းမျိုးစုံနဲ့
ကြံဆနေကြတယ်။ အဓိက က တော့ အန္တရာယ်ကြားထဲက လာရတဲ့အတွက် အသက်အန္တရာယ် အတွက်ပေါ့လေ။ တစ်ချို့ကတော့
ဒီလူတွေကို လက်ခံရင် ငါတို့ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ငွေတွေကို သူတို့အတွက်ကုန်ရတယ် ဆိုပြီးတော့ လက်မခံချင်ဘူး။ အဲသလိုတိုးတက်တဲ့ ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ၊ ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေသော…နယ်နမိတ်ကျူးကျော်လာနိုင်သူများ မရှိသော နိုင်ငံကြီးမှာတောင် ဟိုးအဝေးကြီးက သက်စွန့်
ဆံဖျား လာခဲ့ကြတဲ့ လူတွေကို လက်ခံဖို့ လက်မခံဖို့ ကိစ္စတွေ အမြဲတမ်း အငြင်းပွားနေ ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ ပြောရရင် အိမ်ရှင်ဟာ အိမ်ရှင်ပါပဲဗျာ..အဲ..တစ်ကယ်အိမ်ရှင်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီနေရာဒီဒေသမှာ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု၊ ဥပဒေ နဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေရှိပြီးသားလူတွေဟာ အိမ်ရှင်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး ထင်တယ်။
“ဘင်္ဂါလီ ဟာလည်း ၊ ဒီ မြန်မာ့မြေ တစ်မြေထဲမှာပဲ အတူတကွ မွေးလာတဲ့ ၊
လူ အချင်းချင်းသာလျှင် ဖြစ်တာမို့ ၊ လူသား အချင်းချင်း စာနာမှု ပေးဖို့ပဲ ပြောတာပါ ။”
အဲခုနကပြောသလို အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့ အမည်ခံဖို့အတွက် သူတို့က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဇွတ်အတင်းကြိုးစားနေတဲ့ ဟာကို ဒီမြေထဲမှာပဲ အတူ
တစ်ကွနေထိုဖို့ စာနာဖို့ဆိုတာ..ကိုယ့်ကိုတောင် သူတို့ကစာနာမှု ရှိရဲ့လားဆိုတာကို မေးခွန်းပြန်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ပို့စ်တွေက ကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းစွာမပြောသင့်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေတင်ပြပေးတာ၊ hoax တွေအကြောင်းသတိ
ပေးတာတွေ..က အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းအရာတွေက နောက်ဆုံးတော့ ဂျာဂျာတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေးမြန်မာတွေက အုပ်စုတစ်ခုခု ကိုပြန်တောင်းပန်ရေးတွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်နေတယ်။ သွေးဆူအောင် သွေးကွဲအောင်လုပ်နေသလိုထင်မိတယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှု အခြေခံ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိတောင်မရောက်သေးပဲနဲ့ တောင်းပန်ခြင်း စခန်းကို ဘယ်လိုသွားမလဲ? တောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားက
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်မှုရှိမှ မှားတဲ့လူက တောင်းပန်လို့ရတဲ့ကိစ္စ။ အခုဟာက မယောင်ရာဆီလူး ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးတောင် ပြေပြေလည်လည်
ငြိမ်းချမ်းရေး မရခင် အရင်တောင်းပန် ရမယ်ဆိုတော့
အဘတကယ် ဗမာပြည်သားတွေကို လူ့အခွင့်အရေး ရစေချင်ရင် ဒီလို ကျုးကျော်လာတဲ့ သူတွေအတွက် နယ်ကျော်ပြီး စိတ်ပူပေး ဘက်လိုက်ပြောပေး
နေမဲ့ အစား..အဘကြီးပျင်းခဲ့တဲ့ အရပ်ဒေသ ၀န်းကျင်မှာ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့တရားဝင်နိုင်ငံသားတွေ အတွက်ပူပေးနိုင်မယ်၊ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု
အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနိုင်ရင် ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အောက်က thithtoolwin လင့်လေးမှာ ရှမ်းအမျိုးသမီးလေးတွေ
အတွက် အဘသာ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရင် အကုန်လုံးက “အဘ” တောင်မဟုတ်ဘူး “အဖေ”လို့တောင် ပြောင်း
ခေါ်ကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ အဲဒီမှာ မုဒိမ်းကောင်တစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူ သေနတ်နဲ့ အဆုံးစီရင်သွားတယ်။ နောက်ဆုံး အပိုဒ်က
ဘာပြောလဲဆိုတော့ “မုဒိန်းကျင့်မှုကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သည် အထိဖြစ်ရသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့
တပ်မတော် အတွင်း၌လည်း မုဒိန်းမှုကို တင်းကြပ်တားမြစ်မှု ရှိလာပုံရကြောင်း သျှမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုပါသည်။”
တဲ့နော်။ သူ့တွေးပုံလေး ပညာရှိလိုက်တာ..ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်နေတာတောင် တောင်းပန်ခိုင်းတာတွေ
ကြိုးမိန့်ပေးခိုင်းတာတွေထက်…ဘာကို သုံးသပ်သင့်သလဲ?..တပ်မတော်ဟာ ပြောင်းလဲလာပြီလား? အရင်လိုပဲလား ဆိုတဲ့ အခြေအနေ
တွေကိုပဲ သူက အဓိကထား စဉ်းစားပြီး ပြောတယ်နော်။
ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ သွေးပူပြီးသူ့လို စဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကောင်တွေ ကြိုးပေးသတ်ပြစ်လို့ပဲပြောမိ မလားပဲ။
အဲသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းအောင်ကျိုးစား ပြီးမှ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံ..ကမ္ဘာသွားမှာ
ပေါ့ဗျာ။ ငယ်ငယ်ကတောင် အဲသလိုကဗျာလားဆိုဘူးသေးတယ် “မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ” ဆိုလား…….။
Suspects Tamerlan Tsarnaev and Dzhokhar Tsarnaev
Tamerlan, 26, was an amateur boxer who had reportedly taken time off college to train foracompetition; he described himself asa“very religious” non-drinker and non-smoker
Chechnya is predominantly Muslim. Most of the Chechens belong to the Shafi’i school of thought of Sunni Islam။
သူတို့ဟာ အင်မတန် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ သူတွေတဲ့။
ဆိုင်ကို ဓားမြတိုက်၊ ရဲကို သတ်၊ ကားကို လု တဲ့ အမှုတွေကျူးလွန်အပြီး သူတို့ဟာ ဗုံးခွဲ မှု နဲ့ သံသယ ဖြစ်နေသူတွေ လို့ သိခဲ့တာ။
ဒီလို လူတွေက အပြစ် ဘာမှမရှိတဲ့ သူတွေကို သတ်ခဲ့တာ ဘာသာရေးက သင်ပေးခဲ့တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ဘဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
အမေရိကား လို ဥပဒေလိုက်နာတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေ အတွက် နေရာမရှိပေမဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလို ပိုက်ဆံပေးရင် ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီလို ဘာသာရေးအစွန်းရောက် တွေအတွက် နေရာရှိမှာ စိုးရိမ်မယ် ဆိုလဲ စိုးရိမ်စရာ ပါ။
အခု ယူကေလို နိုင်ငံမှာတောင် UKIP (နာဇီပါတီ လို့ ခေါ်ကြတာဘဲ) လို့ ခေါ်တဲ့ ပါတီ က အီးယူနိုင်ငံက သူတွေကို နိုင်ငံမှာ နေရာမပေးတော့ရေး ပြောပြီး မဲဆွယ်နေတာ အတော်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီ ပါတီသာ နေရာရရင်တော့ တစ်ခြားကသူတွေ ဝင်လာဖို့ အတော်ခက်တော့မယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ လူသားချင်းစာနာရမှာဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံထဲက နိုင်ငံသားတွေ ထောက်ခံမှု ရရင် ဥပဒေဟာပြင်လို့ ရတာဘဲ။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီမှာ လူသားချင်းစာနာတာထက် အများဆန္ဒမဲက ပိုပြီးအရေးကြီးတာလဲ မမေ့နဲ့ အဘ ရေ့။
ပညာရေးဆိုတာမှာ အတန်းပညာတခုထဲမဟုတ်.. အထွေထွေ အသိသညာ. သိနားလည်မှုပညာရေးပါပဲ..
မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ရင်.. အခု ကလေးတန်းပညာရေး.. ကြည့်ဖို့ပါပဲ.. :buu:
ကလေးသူငယ်ဘ၀မှာရိုက်သွင်းခံရရင်.. ကြီးလာတဲ့အခါ..ပြင်ဆင်ရ အင်မတန့်အင်မတန်ခက်ပါတယ်..
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားတွေးခေါ်နေတာတွေကိုတော့. ဘာသာရေးကလွှမ်းမိုးပါတယ်..
အဲလိုလူတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့.. သူတွေများရင်.. တိုင်းပြည်မှောက်တော့တာပဲ…
မှောက်တယ်မမှောက်ဖူး.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ.. လူသားအများစုတွေနဲ့.. ချိန်ထိုးကြည့်ရတာပါ..
ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ ဘက ကျောင်းကို အာပီဂျီနဲ့ချိန်ပျန်ဘီ
သူကြီး ကို ကြည့်ရတာ သီလ သိက္ခာ သမာဓိ နဲ့ ပြည့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်
ဘုန်းတော်ကြီးမျိုးတွေ နဲ့ မတွေ့ဘူးဘဲ လူထက်တောင် ဆိုးတဲ့ ရဟန်းအမည်ခံ တွေ နဲ့ချည်း ကြုံမိနေသလား သူကြီးရယ်။
နိုင်ငံခြားနေတဲ့အသက်တ၀က်ကျော်.. ကြွလာတတ်တဲ့.. ဆတော်ကြီးတွေချည်းကပ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ..
အဘိဓမ္မာအထူးပြုနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့အိန္ဒိယကရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးမြန်းဖူးသလို ပီနန်ဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်း ၀ိပဿနာအကြောင်းမေးဖူးသေးတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာတုံးကလည်း.. ဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်းထုတ်တဲ့အထဲ..ပါဝင်ပါတ်သက်ဖူးတာမို့.. လူဝတ်တွေထဲ.. ဓမ္မကထိကတွေ.. ဘုန်းကြီးထဲနာမယ်ကြီးဆတော်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောဖူးပါတယ်..။
သိပ္ပံစာတွေ.. ကွန်ပြူတာ..စက်ပစ္စည်းလက်တွေလုပ်ကိုင်မောင်းနှင်တာတွေ.. ဘာသာရေးစာတွေ.. တရားထိုင်တာတွေ.. တပြိုင်ထဲကျုပ်လောက်
ကလေးတွေကို.. တရားထိုင်ခိုင်း.. ကလေးနဲ့မတူအောင်စည်းကမ်းသေ၀ပ်အောင်.. ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြှောက်ခိုင်းတာတွေက.. အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အတွက်..အင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်..။
အစ္စလမ်မစ်တိုင်းပြည်တွေက.. အစွန်းရောက်တွေ.. ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတာနဲ့ဘာထူးကွာတယ်ထင်လို့လည်း..
ဟိုကမှ.. သူတို့ဘာသာသာသနာအတွက်အသေခံရင်.. အပျိုစင် ၇၂ယောက်နဲ့ နတ်ပြည်မှာတွေ့မှာတဲ့…
အဲ့ဒါတွေ အခု မြန်မာပြည် လူဦးရေ ရဲ့ ၂၂% ( ဆိုထားတဲ့ ) အခါမှာ လုပ်ရင်လုပ် .. မလုပ်ရင် နောင် ၅၁% ဖြစ်လာတော့မှ လုပ်လို့ ရတော့ဘူး…
ခဏလေးကွယ် ၊ တစ်ခြား Comment တွေ အကြောင်း မပြန်သေးဘဲ ၊
မနေနိုင်လွန်းလို့ ကြားကနေ တစ်ခု အရင် ရေးလိုက်ဦးမယ် ။
အားကစားပွဲကို လာရောက်အားပေးတဲ့သူ ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၊
လူ ၂၀၀ နီးပါး ဒါဏ်ရာ ရရှိစေခဲ့တဲ့ ၊
ဘော်စတွန် ဗုံးကွဲမှု သံသယ ရှိသူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ၊
Tamerlan Tsarnaev ( ချက်ချင်ညာဒေသဖွား ၊ မွတ်ဆလင် ) ဟာ ၊
ကား ဓါးပြတိုက် လုယူပြီး ထွက်ပြေးရင်း ၊
ပုလိပ်တွေ နှင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုမှာ သေဆုံးသွားပါတယ် ။
Hindustan Times သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ သတင်းလေးပါ ။
အံ့သြဖို့ကောင်းတာကတော့ ၊ သူ့ အဒေါ်ရဲ့ အပြောလေးပါ ။
” An aunt of the Boston Marathon bombing suspects said on Friday
the older brother recently becameadevout Muslim who prayed five timesaday, and
she doesn’t believe the brothers could have been involved in Monday’s attack ”
သူ့အဒေါ် အပြောကတော့ ” သူ့တူလေး ( Tamerlan Tsarnaev ) ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင်တဲ့ ၊
တစ်နေ့ကို ငါးခါ ဝတ်ပြုတဲ့ ၊ ဘာသာရေးမှာ အလွန် ယုံကြည်တဲ့ မွတ်ဆလင် တဲ့ ။
ဒါကြောင့် ၊ သူ့တူလေး ဒါမျိုး ( အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် ) လုပ်မယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်ဘူး ” တဲ့ ။
အော် ၊ တစ်နေ့ကို ငါးခါ ဝတ်ပြု ပြီး ၊
ဘာသာရေး အရမ်း ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မွတ်ဆလင်လေးမို့လို့ ၊
မယုံနိုင်လောက်အောင်တောင် ဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေ ။
အော် ၊ အော် ၊ အော် ၊ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွယ် ။
( အဘ ဒီ Comment ထဲမှာ မွတ်ဆလင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၊
ထည့်သုံးရတာကို ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါကွယ် ။
အဲဒီ ၊ မွတ်ဆလင် ဆိုတဲ့ စကားလုံး မပါရင် ၊
သတင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် မပြည့်စုံဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ )
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသူား လိင်တူချစ်သူတွေအနေနှင့် အနှီး ဘာတွေလို့ခေါ်ရမလဲ
ကလား လား ဘင်္ဂါလီလား ထားပါတော့ အဲ့သည်လူတွေအပေါ်ထားရမယ့် သဘောတွေ
ချပြ သင်ကြားပေးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ အနှီး ကလားတွေအနေနှင့်လည်း
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသူား လိင်တူချစ်သူ တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားပေးရမယ်
( ကျုပ်ကတော့ ဟို ဂဏန်းလူပြောတဲ့ အော်လဂျင်နယ် တိုင်းရင်းသားတွေတောင်
ဘာအခွင့်ရေးမှမရသေးဘဲနဲ့ ဒီခွေးသားတွေက ဘါလိုခြင်တာလည်းဆိုတာကတော့ တွေးစရာဘဲ
ဆိုတဲ့သဘောကို တွေးနေမိဒယ် )
ဘါဘဲဖြစ်ဖြစ် ဤပိုစ့်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အထူးတာဝန်ရှိသူ ဘကြီးဖေါနှင့်တစ်ကွ
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဒဲ့ ရှင်လူရဟန်း ပညာရှိ ပညာမရှိ ပညာမရှိတရှိ
ပညာတတ် ပညာမတတ် ပညာမတတ် တတ် နေခြင်တဲ့နေရာမှာ နေကြတဲ့ ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း
အားလုံးကို သဂျီးမင်းကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား
အပေါ်က Comment တွေကို စုပေါင်းပြီး အကြောင်းပြန်ရရင်တော့ ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ ကျနော် ရေးတာတွေဟာ ၊
လူ့ အခွင့်အရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် တရားမျှတမှု ရဲ့
Principle / Ideology ကိုထိလာလို့ ရေးတာပါ ။
အပေါ်မှာ အရီးလတ် ရေးခဲ့တဲ့ ၊
” ဒီမိုကရေစီမှာ လူသားချင်းစာနာတာထက် ၊
အများဆန္ဒမဲက ပိုပြီးအရေးကြီးတာလဲ မမေ့နဲ့ ”
ဆိုတဲ့စကားကို ပြန် ရှင်းပြရမယ် ဆိုရင် ။
ကျနော် အဓိက ထောက်ပြနေတာက လူ့အခွင့်အရေး နှင့် တရားမျှတမှု ကိုပါ ။
တိတိကျကျပြောရရင် ၊ လူနည်းစု ရဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေ ကိုပြောနေတာပါ ။
ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် တစ်ခုဟာ ၊
” Majority Rule, Minority Right ” ပါ ။
လူများစု ကြိုက်သော်ငြားလည်း ၊
လူနည်းစု ရဲ့ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မထိပါးရပါဘူး ။
လူနည်းစု ရဲ့ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ထိပါးလိုက်တာနှင့် ၊
အဲဒီ ၊ ဒီမိုကရေစီ ဟာ မစစ်မှန်တော့ပါဘူး ။
နာဇီ / အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် ဝါဒ ဘက်ကို စတင် ဦးတည်နေပါပြီ ။
ဒါဟာ ၊ အားပေးအားမြှောက် လုပ်ရမယ့် အခြေအနေမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။
လိုရင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
၁ ။ လူ့ အခွင့်အရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် တရားမျှတမှု ရဲ့ ၊
Principle / Ideology ကိုထိပါးလာပြီလို့ ထင်ရင်တော့ ၊
အဘ လည်း ၊ ဒီလိုပဲ ဝင်ပြောနေဦးမှာပါပဲ ။
၂ ။ အေး ၊ အဘ ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး Principle မဟုတ်ပဲ ၊
Personal ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက် emotion ကို ပြောကြေးဆိုရင်တော့ ၊
အဘလဲ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ ဝိပဿနာ တရားစခန်း တောင် ၃ ကြိမ် လုပ်ခဲ့ဘူးသူပါ ။
ဒီ ၉၆၉ မပေါ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက ဒန်ပေါက် မစားခဲ့သူပါ ။
၃ ။ အဲဒီတော့ကာ ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကို မထိပါးပဲ ၊
တရားမျှတမှု ရဲ့ မူ ဘောင် အတွင်းကနေပဲ ၊
ကိုယ့်ရဲ့ Emotional ခံစားမှု မပါပဲ ၊ တုန့်ပြန်နိုင်ကြစေချင်တာပါ ။
အဲလို ၊ လိမ်လိမ် မာမာ ပါးပါး နပ်နပ် နည်းတွေနှင့် တုန့်ပြန်လို့ ရပါတယ် ။
နို့မို့ရင် ၊ တစ်ခါလာလဲ ၊ ဆဲမယ် ၊ သတ်မယ် ဆိုတာချည်းပဲ ။
ဟိုဖက်က မွတ်ဆလင် ( လူဦးရေ ရဲ့ ၂၀% လောက် ) နှင့် ၊
ဘင်္ဂါလီ ( တစ်သန်း နီးပါး ) က ခြေမပါ လက်မပါ တာကျနေတာပဲ ။
သတ်လို့လဲ ကုန်သွား ၊ ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေကလည်း မဟုတ် ။
တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ၊ လူသား အချင်းချင်း ပဲ ၊
သြော် ၊ ငါ့ဘက်ကတော့ နဲနဲ လျော့ပေးမယ် ၊
စည်းရုံး ဆွဲဆောင်မယ် ၊ ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်မယ် ကို မရှိဘူး ။
ဒီလို ၊ တစ်ခါ လာလည်း ၊ အကြမ်းဖက်နည်း ၊ သတ်မယ် ၊ ဖြတ်မယ် ၊
နှစ်ခါ လာလည်း ၊ အကြမ်းဖက်နည်း ၊ သတ်မယ် ၊ ဖြတ်မယ် ၊ အလုပ်ကောင်းလို့ ၊
အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်မှု အောက်က လွတ်ကတည်းက ၊
ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည် ၊ ဘယ်တုန်းက တိုက်တာ ခိုက်တာ ရပ်သွားတယ် ရှိလို့တုန်း ။
( ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ် ရှိတဲ့ နိုင်ငံ တဲ့ ၊ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ )
လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကတည်းက တိုင်းပြည် က ၊ တစ်နေ့ထက် ၊ တစ်နေ့ ပိုပို ပြီး မွဲမွဲ လာပြီး ၊
ဘေးနား နိုင်ငံတွေ ကြားမှာ ၊ တစ်နေ့ထက် ၊ တစ်နေ့ ပိုပို ပြီး အဆင့်နိမ့်လာတာ ၊
သတိ မထားမိဘူးလား ။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်သတုန်း ။
ရှင်းရှင်းပြောမယ် ၊ စစ် အစိုးရ က လုပ်သွားလို့ / ရှေ့က နမူနာပြသွားလို့ ၊ အများစုရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ၊
အကြမ်းဖက်တဲ့နည်း ၊ အနိုင်ကျင့်တဲ့နည်း တစ်ခုတည်း ( တစ်ခုတည်း ) ကို ၊
ဖြေရှင်းနည်း ဆိုပြီး ၊ စွဲကျန်နေခဲ့တာ ၊ နဲနဲမှ သတိ မပြုမိဘူးလား ။
Might is Right ဆိုတဲ့ Hard Power တစ်ခုတည်း နည်း မဟုတ်ဘူးဗျ ။
Soft Power မှာကိုပဲ နည်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ။
ပို့စ်နှင့်တကွ ကွန်မန်းတွေကို ဖတ်ရတာ အင်မတန်အကျိုးများလှတယ်….
ကျုပ်ကတော့ ဘာနာဂန်းမှ မသိလို့ သူများပြောတာလေးတွေကိုပဲ
ဟိုဟာဟုတ်နိုးနိုး ဒီဟာဟုက်နိုးနိုး ဇဝေဇ၀ါဖြင့် လေ့လာသွားပါတယ်……..
” ယနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက ပြဿနာမှာ ရေမြေခြားက လာတဲ့ မွတ်တွေကို
မြန်မာပြည်သား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ လဝက တွေ ”
အဲဒါပဲ ၊ အဲဒါပဲ ၊ မြန်မာ လူမျိုး အများစု ၊ အဓိက လွဲနေတာ အဲဒါပဲ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် လေး ငါး ဆယ် အတွင်းမှာ ၊
မြန်မာပြည်တွင်းကို ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဆိုတာ မရှိသလောက် ( မရှိသလောက် ) ပါပဲ ။
တိတိကျကျ ပြောရရင် ၊ ၁၉၇၁ ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ စတင် ထူထောင်ပြီး ကတည်းက ၊
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ ကနေ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းကို ဝင်လာတဲ့သူက မရှိသလောက် ပါပဲ ။
မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲကနေပြီး ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ကို ထွက်ပြေးခိုလှုံကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေသာ သိန်းချီ ရှိတာဗျ ။
( အဲဒါကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေက မကြာခဏ ထောက်ပြနေပါတယ် )
( မြန်မာ အစိုးရ ကလည်း အဲဒီ ကိစ္စ ကို ၊ မကြာခဏ ဝန်ခံရပါတယ် )
( သိပ်မကြာသေးခင်ကကိုပဲ ၊ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ရောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် တွေ ( ၂ သိန်းလောက် ) ကို
မြန်မာ နိုင်ငံ က ပြန်လည် လက်ခံပါမယ် ဆိုပြီး ၊ ကတိပေးခဲ့ရပါသေးတယ် )
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ ကနေ မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲကို ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ ဆိုတာ ၊
သက်သက် ပြဿနာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆွပေးနေတဲ့ စကားတွေ ခမျ ။ မယုံပါနှင့် ။
ပထမ ဦးဆုံး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ တို့ရဲ့ ၊
ဖြေကြားထားတဲ့ ဟောဒီ VDO ကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါ အုန်း ။
အဲဒီ VDO ကြည့်ပြီးရင်တော့ တော်တော်လေး ရှင်းနေလောက်ပါပြီ ။
၁ ။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ ဟာ ၊
မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ ထက် မြင့်တဲ့ အတွက် ၊
အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာ ပြည်ကို မလာပါဘူး ။
( ၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ဟာ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီ တွေ ဆိုတာပြောနေရင်း ၊
လက်တွေ့ မျက်တွေ့ ရခိုင်ကို ရောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီ မရှိပါဘူးလို့ ၊
ဘာကြောင့် ပြောင်းပြောသွားရတယ် ဆိုတာ ပြန် စဉ်းစားကြည့်ပါ )
၂ ။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်က စပြီး ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီ တွေကို ၊
ဒီလောက် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်နေတာ ၊ တစ် ကမ္ဘာလုံးက သိနေတာပဲဟာ ဘယ်သူက ထပ်လာမှာတုံးဗျာ ။
( ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖိနှိပ် အချုပ်ချယ် အခံရဆုံး လူမျိုးစု( Most Oppressed ) ဆိုပြီး သိနေတာပဲဟာဗျာ )
၃ ။ အခု ဂျာနယ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဖမ်းမိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ ဆိုတာဟာလည်း ၊
တကယ်က ၊ နိုင်ငံခြား ဘင်္ဂလားဒေရှ့် က ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ မဟုတ်ပါဘူး ။
မြန်မာပြည် ထဲမှာ အရင်ကတည်းက ရှိနေပြီးသား ဘင်္ဂါလီ တွေ ပါ ။
သူတို့ ခမျာ အစိုးရ အဆက်ဆက် ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ခံထားရတော့ ၊
စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ပညာမဲ့ ဖြစ်ပြီး ၊ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ၊
နေရာတွေကို ၊ ထွက်ပြေးနေရတာပါ ။
သူတို့ ဦးတည်ထွက်ပြေးနေတာကလည်း မြန်မာပြည် ထဲကို မဟုတ်ပါဘူး ၊
သူတို့ကို ၊ လူလို သူလို တန်းတူ ဆက်ဆံမယ့် ၊ ဘာသာတူ ၊
မလေး ၊ အင်ဒို နိုင်ငံတွေကို ပြေးကြရင်း ၊ လမ်းမှာ မိသွားတာပါ ။
၄ ။ နောက်ပြီး ၊ လဝက က လာဘ် စားပြီး သွင်းတယ် ဆိုရအောင် ၊
အဲဒီ VDO ထဲမှာ ဦးခင်ရီ ရှင်းထားပြီးသားပါ ၊
ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲက လဝက ရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ဟာ ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ၊
တမင် ခန့်ထားတာပါ ၊ လူမျိုးရေး စိတ်ဓါတ် အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ က ၊
လာဘ် စားပြီး ဘင်္ဂါလီ တွေကို ဘယ် သွင်းပါ့မလဲဗျာ ။
၅ ။ တကယ်က ၊ လက်ရှိ ဘင်္ဂါလီ တွေ အရမ်းများနေတာက ၊
အဲဒီ မြန်မာပြည်ထဲက ရှိနေပြီးသား ဘင်္ဂါလီ တွေ ရဲ့ ၊
လူဦးရေ တိုးနှုန်းက အရမ်းများနေလို့ ခမျ ။
၆ ။ စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ ၊ အချက် အလက် အမှန်တွေကို မရရင် / မထည့်သွင်းရင် ၊
အဖြေမှန် / ဖြေရှင်းချက် အမှန်ကို ဘယ်တော့မှ မရဘူးဗျ ။
အချက် အလက် အမှန် Fact တွေကို မျက်ကွယ်ပြု ၊
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု Emotion နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီး ၊
ကိုယ် ကြားချင်တဲ့ သတင်းလေးကိုပဲ ကွက်နားထောင်ပြီး ပြောနေရင်တော့ ၊
ဒီတိုင်းပြည် မကြာခင် ပျက်လိမ့်မယ် ဗျ ။
သေသေချာချာ ၊ စေ့စေ့တွေးကြည့်ပါ ၊
အမေစု လို ၊ သမိုင်း အစဉ်အလာလဲရှိ ၊ တရားမျှတမှုလဲရှိ ၊
တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာလည်း သိပ်သေချာနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်က ၊
ဒီ ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စမှာ ဘာကြောင့် ဝင် မ ပြောရတာလဲ ဆိုတာ ။
မွတ်ဆလင် လဲတစ်ယောက်မှ မရှိ ၊ ကုလား ကိုလည်း မချစ်တတ်တဲ့ ၊
ဗမာ့ တပ်မတော်ကြီး ကိုယ်နှိုက်က ၊ ခြေလွန် လက်လွန်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ။
နောက်ဆုံး ” တပ်မတော် ဟာ အမှန်တရား ဘက်မှာပဲ ရပ်တည်မယ် ” ဆိုပြီး ၊
ဘာကြောင့် ဝင်ဟန့်ရလဲ ဆိုတာ ။
သေသေချာချာ လေးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ ။
တကယ့် အဖြစ်မှန်ဟာ ၊ ဘာဖြစ်နေမလဲ ဆိုတာ ရေးရေး ပေါ်လာလိမ့်မယ် ။
အောင်မယ်လေး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာသမားများရေ ။
အခု Face Book မှာ မိထ္ထီလာ လူသတ်ပွဲ VDO တွေ တက်လာပါပေါ့လား ။
မသေ မရှင် လူကို ၊ မီးရှို့ပြီး ၊ ကုန်းစောင်းက ကန်ချတာတွေပါ တွေ့နေရပြီ ။
အသုံးမကျတဲ့ ရဲတွေက လည်း ၊ လူမီးလောင်ပြီး လှိမ့်နေတာကို ငုတ်တုတ် ထိုင်ကြည့်နေတယ် ။
ကုလား ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဗမာ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကူပါ ကယ်ပါတော့လား ။ ဒီ ရဲတွေကိုလဲ ဆဲချင်တယ် ။
ဒီ VDO တွေ အခုကိုပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆီ ပျံ့နေလောက်ပြီ ။
မပျံ့ပဲလဲနေမလား ၊ Myanma Muslim Media က ၊
အပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲပြီးကို ၊ သေသေချာချာ ရိုက်တင်လိုက်တာ ။
အခု ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မလည်း ။
ကိုယ့်ဖက်က နိုင်လည်း ဒီအတိုင်းကြည့်မနေကြပါနှင့် ၊ ဆရာတို့ ရဲ့ ။
ဆဲတာ ဆိုတာ ၊ အမုန်းပွားတာတွေကို လျော့ဖို့ ၊ တားဖို့ မစဉ်းစားကြတော့ဘူးလား ။
( အခုမှ လျော့လဲ သိပ်တော့ မထူးတော့ပါဘူး ၊ နောက်ကျနေပါပြီ )
O K လေ ။ တိုင်းပြည် ရဲ့ ကံ ကြမ္မာ ကိုယ်နှိုက် ကိုက ၊
နောက်စစ်ပွဲတစ်ခုကို တောင်းတနေပြီလို့ဘဲ သဘောထားလိုက်တော့မယ် ။
အေး ၊ ဒါပေမယ့် ၊ ဒီတစ်ခါ ဖြစ်ရင် ၊ ဖြစ်တဲ့ ပွဲတွေက ၊
အရင် တိုင်းရင်းသားတွေ နှင့် ဖြစ်တုန်းကလို နယ်စပ်မှာ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
ဗမာ ပြည်မ ကြီးမှာ ဖြစ်မယ့်ပွဲတွေ ကွယ့် ။
အဲလိုတွေဖြစ်မှာ စိုးလို့ ၊ အဘ လည်း စာနာပါ ၊ ထိမ်းချုပ်ပါ တဖွဖွ ရေးနေတာ ။
အခုတော့ ၊ အဘ လည်း ထပ် မရေးတော့ဘူး ။ တော်ပြီ ။
သဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မ သကာ ပဲ ။
ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ နောက်နေ့လဲကျရော BBC ကနေ သတင်းတက်လာပြီလေ ။
သောက်ရှက်ကို ဗြန်းဗြန်းကွဲတော့တာပါပဲ ။
” မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်း အတွင်း ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေက လူအုပ်နဲ့ မွတ်ဆလင် တွေကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် နေတာကို ၊
ရဲတွေက ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ပုံတွေ ပါတဲ့ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွေကို ဘီဘီစီက ရရှိထားပါတယ် ။
ရဲက ရိုက်ယူထားတဲ့ မှတ်တမ်းကား ဖြစ်လို့ ၊ အထောက်အထား ရယူပုံ စနစ်ကျ ပြည့်စုံပြီး ၊
နှိပ်စက် လုယက် ခံရသူတွေကို ရဲက မကာကွယ်ခဲ့တာ ပေါ်လွင်ပါတယ် “